January 2010 | " မနာပဒါယီ "
။ အချိန် 1/28/2010 08:01:00 PM
စိတ်…စိတ်…စိတ်။ ဒီစိတ်က လူကို အတော်ဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်။ စကားလုံးလေး တစ်လုံးတည်းမို့ တော်သေးတယ် မဟုတ်ရင် ဘယ်လောက်များ ဒုက္ခပေးလိုက်မယ် မသိဘူး။ တစ်ခါတစ်လေ ဘာမှမဟုတ်ဘဲ၊ ဘယ်သူမှ မရှိဘဲ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် တစ်ယောက်တည်း ဒီစိတ်က ဒုက္ခပေးလို့ ခံနေရတာလည်း မနည်းတော့ဘူး။ အဲဒီစိတ်ကို ထိန်းကြည့်ပေမယ့် ပြောင်းလဲဖြစ်ပျက်မှုက အရမ်းမြန်တော့ ထိန်းမရဘူး ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်။ မြန်တာမှ အခုဒီစာရေးနေ ချိန်မှာတောင် ဟိုပြေးဒီပြေး ဖြစ်နေတာ။ စိတ်ကမြန်လေ ကိုယ်ကလိုက်မမီလေ ဖြစ်နေတော့ သူသွားသမျှ ကိုယ်ပါလိုက်နေရင်း မမီတဲ့ကိုယ်ပဲ ဆင်းရဲဒုက္ခတွေ ကြုံနေရတော့တာပါပဲ။ ဒီစိတ်က ဘယ်လောက်မြန်လဲဆိုရင် အဆင်း၊ အသံ၊ အနံ့၊ အရသာ၊ အတွေ့ ဘာပဲလာလာ လာသမျှ အရာတွေနောက် ထပ်ကြပ်မကွာ လိုက်နိုင်တဲ့အထိကို မြန်တာပါ။ ခပ်ရှင်းရှင်းပြောရရင် ဘယ်လိုအာရုံမျိုးမဆို သူက အမှီလိုက်နိုင်တယ်လေ။ စိတ်က အဲဒီလို တွေ့သမျှ အာရုံတွေနောက်ကို လိုက်လိုက်နေလေ သူနဲ့အတူရှိနေတဲ့ ကိုယ့်မှာ ဒုက္ခတိုးလေလေပါပဲ။ ဒါကြောင့် ပညာရှိများက “အာရုံနောက်ကို စိတ်မလိုက်စေနဲ့”လို့ ပြောတာနေမှာပါ။
ဟုတ်တယ်။ လောကမှာ ဒုက္ခအပေးဆုံး အရာဟာ စိတ်ပဲလို့ ဆိုကြသလို ဒီစိတ်ကြောင့် ကိုယ်အပါအ၀င် သတ္တ၀ါတွေဟာ ဒုက္ခပင်လယ် ဝေနေကြတာပါ။ အဲဒါ သူများက ဒုက္ခပေးလို့ မဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်စိတ်က ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီး ဒုက္ခပေးလို့ ဖြစ်တာပါ။ လက်တွေ့ဘ၀မှာပဲ ကြည့်ကြည့်လေ စိတ်က ဒုက္ခပေးနေတော့ တွေ့သမျှ အဆင်း၊ အသံ၊ အနံ့စတဲ့ အာရုံတွေအပေါ်မှာ လိုက်ပြီးကိုယ်ပါ ဒုက္ခဖြစ်နေတာ။ သိတဲ့အတိုင်းပဲ စိတ်က သူကြိုက်တဲ့ အဆင်းဆို ခဏခဏ လိုချင်နေပြီး သူမကြိုက်တဲ့ အဆင်းဆို ထစ်ခနဲဆို စိတ်တိုလိုက်၊ စိတ်ကောက်လိုက်၊ စိတ်ညစ်လိုက် ဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။ ပိုဆိုးတာက ဒီစိတ်က တစ်သမှတ်တည်း မရှိတာပါ။ လိုရင်တစ်မျိုး မလိုရင်တစ်မျိုး အမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာပါ။ စိတ်ကကြိုက်လို့ လိုချင်နေတာကို ကိုယ်ကပါလိုက်ပြီး နေလို့ကတော့ ရှာပေတော့လို့ပဲ ပြောရမလိုဖြစ်နေတယ်။ ဆုံးကို မဆုံးနိုင်တော့ပါဘူး။ စိတ်ဆိုတာကလည်း အလိုပြည့်တာ မဟုတ်တော့ တွေ့သမျှ အဆင်းအမျိုးမျိုးကို လိုချင်နေတော့တာပါ။ အဲ စိတ်က သူမကြိုက်တဲ့ အဆင်းဆိုလို့ကတော့ မြင်လိုက်တာနဲ့ မျက်စိပျက်၊ မျက်နှာပျက်ပဲ။ အဲလောက်ဆိုတော်သေးတယ်။ အဲဒီအဆင်းကို အမှီပြုပြီး တစ်ခုခု ထလုပ်လိုက်ရင်တော့ ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရဖြစ်ပြီး ဆိုးကျိုးတွေပဲ ဖြစ်စေတော့တယ်လေ။ ဒါကြောင့် စိတ်က ကြိုက်ကြိုက် မကြိုက်ကြိုက် သူ့ကို အဲဒီအဆင်းဆိုတဲ့ အာရုံနောက်ကို မလိုက်အောင် ထိန်းဖို့ပြောကြတာ ဖြစ်မှာပါ။ အဆင်းကို မြင်ရင် အဲဒီမြင်တဲ့အခိုက်မှာ အဆင်းလို့ပဲ ထားနိုင်အောင် စိတ်ကိုထိန်းဖို့နဲ့ မထိန်းလို့ကတော့ အဖြူ၊ အပြာ၊ အနီ၊ အ၀ါ စတဲ့ အဆင်းတွေနောက်လိုက်ပြီး ကြိုက်ရင် ကြိုက်သလို၊ မကြိုက်ရင်လည်း မကြိုက်သလို လုပ်တတ်ကြောင်း သတိပေးကြတာ ဖြစ်မှာပါ။ အဆင်းကို အဆင်းလို့မမြင်ဘဲ အဲဒီကာလာနောက်ကို စိတ်ကစွဲသွားရင် လှတယ်မလှဘူးဆိုတဲ့ အမည်ပညတ်တွေနဲ့ လောဘတွေဖြစ်လိုက်၊ ဒေါသတွေဖြစ်လိုက်နဲ့ တစ်လျှောက်လုံး ဒုက္ခပဲ ဖြစ်နေတတ်ကြောင်း ဆိုခြင်းဖြစ်မှာပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မျက်စိနဲ့ မြင်ရသမျှ အဆင်းတွေကို မြင်တဲ့အခိုက်မှာပဲ အဆင်းလို့ သိအောင်ကြိုးစားပြီး အဲဒီအဆင်းအပေါ်မှာ မစွဲမိဖို့၊ စွဲမိပါက အကောင်းအဆိုးတွေ ဖြစ်လာပြီး အကြောင်းအကျိုး မသိဖြစ်တတ်တဲ့အတွက် အဖြစ်မြန်တဲ့ ဒီစိတ်ကို သတိနဲ့ထိန်းဖို့ တိုက်တွန်းကြတာ ဖြစ်မှာပါ။
ပြီးတော့ အသံနောက်ကိုလိုက်ပြီး ဒုက္ခဖြစ်စေတာလည်း ရှိသေးတယ်။ စိတ်ကအရမ်းမြန်တော့ အသံကြားလိုက်တာနဲ့ အဲဒီအသံနောက်ကို လိုက်သွားတော့တာပဲလေ။ အသံထက်မြန်တဲ့ ဒီစိတ်က အသံကို အသံလို့ သဘောမထားဘဲ အဲဒီအသံကို အမှီပြုပြီး စွဲလိုက်မိပြီ ဆိုလို့ကတော့ အသံကောင်းတယ်၊ အသံဆိုးတယ်၊ သာယာတယ်၊ အေးမြကြည်လင်တယ်၊ နားဝင်ချိုတယ်၊ မချိုဘူး စတဲ့ ပညတ်အခေါ်တွေနဲ့ ဆက်တိုက်ဆိုသလို ဒုက္ခဖြစ်စေပါတော့တယ်။ အသံကို ကြားနိုင်တာ နားကလို့ဆိုပေမယ့် ကြားတဲ့အသံကို အသံလို့ သဘောထားနိုင်အောင် ကြားတယ်ဆိုတဲ့ အခိုက်အတန့်မှာ ရပ်နိုင်အောင် စိတ်ကို ထိန်းပေးဖို့လိုပါတယ်။ မထိန်းနိုင်ရင်တော့ ထုံးစံအတိုင်း ဒီစိတ်က အသံကိုမှီပြီးတော့ အကောင်းအဆိုးတွေ ဖြစ်အောင် ပြောင်းလဲလိုက် တတ်ပါတယ်။ ကြားသမျှ အသံကို လိုက်ပြီး အမည်ပညတ်တွေ တပ်လို့ အစွဲအလန်း ပွဲကြမ်းစေတတ်ပါတယ်။ အသံတွေကို ကြားတဲ့အခိုက်မှာ ကြားတယ်လို့ မသိလိုက်တော့ ကြားသမျှအသံ၊ ပြောသမျှစကားလုံးတွေကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု လိုက်ခံစားတတ်ပါတယ်။ အဲဒီလို စကားလုံးဆိုတဲ့ ပညတ်အဖြစ် ပြောင်းလာတဲ့ အသံတွေကို လိုက်ခံစားမိတဲ့အတွက် ဘယ်သူက ဘယ်လိုပြောတာ၊ ဘယ်တုန်းက ဘယ်လိုကြားတာ စတဲ့ ကောင်းမကောင်း ခံစားမှုတွေဖြစ်ပြီး ကောင်းရင်လောဘဖြစ်လိုက်၊ မကောင်းရင် ဒေါသဖြစ်လိုက်၊ အလိုမကျဖြစ်လိုက်တော့တာပါပဲ။ တစ်ခါတစ်လေ တိုက်ရိုက်ကြားရတာ မဟုတ်ဘဲ သူများပြောလို့ တစ်ဆင့်ပြန်ကြားတာတွေတောင် လိုက်ခံစားပြီး ဒုက္ခဖြစ်လိုက် ကြပါသေးတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ အသံကို ကြားတဲ့အခိုက်မှာ မသိလိုက်နိုင်တဲ့အတွက် စကားလုံးအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားတဲ့ ပညတ်တွေကို လိုက်ပြီးခံစားမိတဲ့ စိတ်ကြောင့် ဒုက္ခဖြစ်သွားတာက ကိုယ်ပါပဲ။ အသံဆိုတဲ့ အာရုံနောက်ကို စိတ်ကလိုက်သွားတဲ့အတွက် ဒီစိတ်ကောင်းရင် ကိုယ်ပါကောင်းပြီး ဒီစိတ်မကောင်းရင် ကိုယ်ပါမကောင်း ဖြစ်စေတော့တာပါပဲ။ ကောင်းရင်လည်းဒုက္ခ၊ မကောင်းရင်လည်း ဒုက္ခဖြစ်တဲ့အတွက် ကောင်းမကောင်းဆိုတဲ့ ပညတ်ကိုခွါပြီး အစွဲမြန်တဲ့စိတ်ကို မစွဲနိုင်အောင် ထိန်းပေးတာက အကောင်းဆုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဒီစိတ်က အနံ့တွေနောက်ကိုလည်း လိုက်တတ်ပါသေးတယ်။ နှာခေါင်းနဲ့ ထိတွေ့မှ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အနံ့တွေကို စိတ်ကလိုက်ပြီး ခံစားမိတဲ့အခါ နံသိစိတ်တွေ ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒီအနံ့ကို ခံစားမိတဲ့အခါ အနံ့ပဲလို့ မသိနိုင်ရင် အနံ့ကိုအစွဲပြုပြီး အကောင်းအဆိုးတွေ ဖြစ်စေကာ ဒုက္ခတွေလည်း ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။ အနံ့ကောင်းတယ်၊ အနံ့ဆိုးတယ်တွေ ဖြစ်လာပြီး ကြိုက်မကြိုက်တွေ ဖြစ်ကုန်ပါတယ်။ အနံ့ကိုစွဲတဲ့ စိတ်ကကြိုက်ရင် အနံ့ကောင်းတယ် ဖြစ်ပြီး မကြိုက်ရင် အနံ့ဆိုးတယ် ဖြစ်ကုန်ပြန်ပါတယ်။ အနံ့ကို စွဲမိတဲ့အတွက် စွဲတဲ့သူရဲ့စိတ်ကိုလိုက်ပြီး သူကြိုက်တဲ့အနံ့ ကိုယ်မကြိုက်၊ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အနံ့ သူမကြိုက်ဖြစ်ကာ အကြိုက်ချင်းမတူလို့၊ တစ်ခါတစ်လေ အကြိုက်ချင်းတူလို့ ဒုက္ခဖြစ်ကြ ပြန်ပါသေးတယ်။ အနံ့ဆိုတာကလည်း စွဲလန်းကောင်းတဲ့ အရာမဟုတ်တဲ့အတွက် အခေါ်အဝေါ် ပညတ်တွေတပ်လိုက်ရင် အနံ့ကောင်း အနံ့ဆိုးတွေအဖြစ် ကောင်း၊ မကောင်း ပြောင်းကုန်ပါတော့တယ်။ မစင်နံ့ဟာ လူတွေအတွက် မကောင်းပေမယ့် ခွေးတွေအတွက် ကောင်းနေတတ်သလို အနံ့ကို အမှီပြုပြီး စွဲလန်းတတ်တဲ့ စိတ်ကြောင့် လူအမျိုးမျိုး စိတ်အမျိုးမျိုး ဖြစ်နေကြတာတွေမှာ အနံ့တစ်ခုဟာ ကိုယ့်အတွက် မကောင်းပေမယ့် သူများအတွက် ကောင်းရင်ကောင်းနေ တတ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ကောင်းမကောင်းဟာ ဒီအနံ့ကို စွဲမိတဲ့ စိတ်ကြောင့်၊ အနံ့ကို နံတဲ့အခိုက်မှာ အနံ့လို့ မသိဘဲ မွှေးတယ်၊ မမွှေးဘူး၊ ကောင်းတယ်၊ မကောင်းဘူးဆိုတဲ့ အစွဲပညတ်တွေနောက် စိတ်က လိုက်သွားမိတဲ့အတွက်ကြောင့် ကိုယ်ပဲဒုက္ခဖြစ်စေတော့တာပါ။ ဒါကြောင့် အနံ့ကိုနံတဲ့အခါ နံတဲ့အခိုက်ကို သိအောင်ကြိုးစားပြီး အဲဒီအနံ့ဆိုတဲ့ အာရုံနောက်ကို စိတ်မလိုက်ကြဖို့ တိုက်တွန်းကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အရသာမှာလည်း ဒီလိုပါပဲ။ ရသဆိုတဲ့ အာရုံနောက်ကို စိတ်မလိုက်မှ ဖြစ်မှာပါ။ လိုက်မိလို့ကတော့ မဆုံးနိုင်တဲ့ ဒုက္ခတွေပဲ ကြုံနေပါလိမ့်မယ်။ လျှာအလိုလိုက် လောမတိုက်နဲ့လို့ ဆိုသလို အရသာကို ခံစားတတ်တဲ့ လျှာကိုလောဘမဖြစ်အောင် အလိုမလိုက်ဖို့တော့ လိုပါလိမ့်မယ်။ လျှာအလိုလိုက်တယ်ဆိုတာ အမှန်တော့ စိတ်ကိုအလိုလိုက်တာပါပဲ။ စိတ်ကို မထိမ်းနိုင်တဲ့အတွက် အရသာနဲ့ လျှာနဲ့တွေ့တဲ့အခိုက် ကောင်းတယ်၊ မကောင်းဘူးဆိုတဲ့ ခံစားချက်တွေ ဖြစ်ပေါ်နေတာပါ။ အမှန်တော့ အရသာရှိတယ် မရှိဘူးဆိုတာ လျှာအလယ်မှာရှိတဲ့ ဇိဝှါပသာဒကို ဖြတ်တဲ့အချိန်လေးလောက်ပါပဲ။ ဒီအခိုက်လေးအတွက် သတ္တ၀ါတွေဟာ ရသအမျိုးမျိုးကို ဖန်တီးပြီး ဒုက္ခတွေနောက် လိုက်နေမိကြတာပါ။ ဘာပဲစားစား ဗိုက်ပြည့်သွားရင်တော့ အရသာ ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ အရာလည်း မစားချင်တော့ပါဘူး။ အရသာ မရှိတော့ပါဘူး။ အဓိကကတော့ အရသာဆိုတဲ့ အာရုံနောက်ကို စွဲလန်းတတ်တဲ့ စိတ်က လိုက်မသွားဖို့ပါပဲ။ ဒီအာရုံကို စိတ်က စွဲမိပြီဆိုရင်တော့ အကောင်းအဆိုးတွေ ပေါ်နေပြီး ကောင်းတယ်ထင်ရင်လည်း ကောင်းတဲ့အလျှောက် ဒုက္ခဖြစ်တတ်သလို ဆိုးရင်လည်း ဆိုးတဲ့အလျှောက် ဆင်းရဲရတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အရသာဆိုတဲ့ အာရုံနောက်ကို စိတ်မလိုက်နိုင်အောင် ဘယ်လိုအရသာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အရသာနောက်မှာ အကောင်းအဆိုး ပညတ်တွေ မကပ်ဘဲ ဒါဟာ ရသပဲလို့ ဖြစ်ခိုက်အမှန်ကို သိအောင်ကြိုးစားကြဖို့ သတိပေးကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ်စိတ်ကို စွဲဆောင်တတ်တဲ့ အာရုံတစ်ခုက အတွေ့အထိဆိုတဲ့ အာရုံပါပဲ။ ရုပ်ရုပ်ချင်း ထိတွေ့တဲ့ သဘောမှာ စိတ်အစွဲ ၀င်လိုက်ရင်တော့ နူးညံ့တဲ့အတွေ့၊ ကြမ်းတမ်းတဲ့အတွေ့၊ ပျော့ပြောင်းတဲ့အတွေ့၊ မာကျောတဲ့အတွေ့ စတဲ့ ပညတ်တွေဝင်လာပြီး အဲဒီပညတ်တွေနောက် စိတ်က လိုက်သွားမိတဲ့အတွက် အတွေ့ကောင်းရင်လည်း ကောင်းတဲ့အလျှောက် မကောင်းရင်လည်း မကောင်းတဲ့အလျှောက် ဒုက္ခဖြစ်စေပါတော့တယ်။ အတွေ့အထိဆိုတဲ့ အာရုံအပေါ် စိတ်အစွဲက ၀င်သွားမိတဲ့အတွက် တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့၊ တစ်စုံတစ်ခုနဲ့ ထိတွေ့နေရတာကိုက ခံစားမှု တစ်ခုဖြစ်နေတော့တာပါ။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အထိအတွေ့ဆိုရင် ဆက်တိုက်အမြဲ ခံစားချင်နေတတ်ပြီး မကြိုက်တဲ့ အတွေ့အထိ ဆိုလို့ကတော့ အလိုမကျမှု၊ မကျေနပ်မှု၊ ဒေါသထွက်မှုတွေနဲ့ စိတ်ဒုက္ခတွေပဲ ဖြစ်နေကုန်တော့တာပါ။ စိတ်ကလည်း အခက်သား စွဲမိပြီဆိုရင် လက်ကလေး ကိုင်ထားရတာကိုက အရသာ ရှိနေတယ်ဆိုတာပဲ။ အပေါ်ယံအရေပြား အထိအတွေ့လေးကိုပဲ အဟုတ်ထင်ကာ မလှုပ်ချင်အောင် ဖြစ်မိတယ်လို့လည်း ဆိုကြသေးတယ်လေ။ စိတ်အစွဲလေးက ဖုံးထားလေတော့ ချွေးတစ်လုံးလုံးထွက်ပြီး နံဆော်နေတဲ့ သူ့ခန္ဓာကိုယ် အနံ့ကိုလည်း မမြင်မိ၊ မခံစားမိတော့ဘဲ ပျော်နေမိတော့တယ်တဲ့။ ကိုယ်နဲ့ အဆင်မပြေ၊ ကိုယ်မနှစ်သက်တဲ့သူ ဆိုလို့ကတော့ လက်ချင်းယှက်ဖို့ နေနေသာ မျက်နှာမြင်ရတာကိုက အကုသိုလ်ဖြစ်နေတယ်တဲ့။ အတွေ့အထိအပေါ် စိတ်အစွဲ ၀င်မိရင် ဒီလိုပါပဲ။ အတွေ့အထိအပေါ် စိတ်ကစွဲမိလေတော့ အကောင်းအဆိုးတွေဖြစ်ပြီး အကြောင်းအကျိုးပါ မသိ၊ အမှားကို အမှန်ထင်၊ အမှန်ကို အမှားထင်ကုန်တော့တာပေါ့။ တရားခံကတော့ အာရုံအပေါ် စွဲလမ်းမိတဲ့ အတွက်ကြောင့်ပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဒီအထိအတွေ့ဆိုတဲ့ အာရုံအပေါ်မှာလည်း စိတ်မလိုက်မိဖို့၊ စိတ်မှာအစွဲတွေ မဖြစ်ဖို့၊ တွေ့ထိတဲ့အခါမှာလည်း အကောင်းအဆိုး၊ အကြမ်းအနု စတဲ့ခံစားချက်များ မ၀င်ဘဲ အတွေ့ပါပဲလို့ အမှန်ကို သိအောင် သတိဆောင်ပြီး ထိန်းသိမ်းကြဖို့ သတိပေးကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အချုပ်ပြောရရင် အာရုံတွေနောက်ကို စိတ်မလိုက်မိကြဖို့ပါပဲ။ အဆင်းဆိုတဲ့အာရုံ၊ အသံဆိုတဲ့အာရုံ၊ အနံ့ဆိုတဲ့ အာရုံ၊ အရသာဆိုတဲ့ အာရုံ၊ အထိအတွေ့ဆိုတဲ့ အာရုံတွေအပေါ်မှာ စိတ်အစွဲမ၀င်မိဖို့နဲ့၊ စွဲမိပြီဆိုရင် အကောင်းအဆိုးတွေ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး အမည်ပညတ်တွေ အပေါ်မှာ စိတ်ကလိုက်ပြီး ခံစားနေတတ်တဲ့ အတွက် ဒုက္ခတွေပဲ တိုးနေတယ်ဆိုတာ သတိပြုကြဖို့ ပြောလိုရင်းပါ။ ပြီးတော့ စိတ်စွဲတယ်ဆိုတာကလည်း ဒီအာရုံတွေကို ဖြစ်ခိုက်ပေါ်ခိုက်မှာ အဆင်းပဲ၊ အသံပဲ၊ အနံ့ပဲ၊ အရသာပဲ၊ အတွေ့အထိပဲလို့ အမှန်ကို မမြင်မိတဲ့အတွက် လှတယ် မလှဘူး၊ အသံကောင်းတယ် မကောင်းဘူး၊ အနံ့မွေးတယ် မမွေးဘူး၊ အရသာရှိတယ် မရှိဘူး၊ အတွေ့အထိ နူးညံ့တယ် မနူးညံ့ဘူးစတဲ့ အကောင်းအဆိုး အမည်နာမ ပညတ်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာတာကို ဆိုလိုပြီး ဒီလိုပညတ်တွေ ပေါ်လာတဲ့အတွက် ပညတ်နောက်ကို လိုက်နေမိတဲ့ ကိုယ်မှာလည်း ဒုက္ခအမျိုးမျိုးပဲ ဖြစ်နေတတ်ကြောင်း ဆိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အလွဲအမှားတွေနဲ့ အစွဲတရားတွေကင်းပြီး စိတ်မှာပေါ့ပေါ့ပါးပါး လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဖြစ်ချင်နေတဲ့သူများ အနေနဲ့ အစွဲတရားတွေ ဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ အာရုံတွေနောက်ကို စိတ်မလိုက်နိုင်အောင် မမေ့မလျော့တဲ့ သတိတရားနဲ့ ဖြစ်တဲ့အခိုက်၊ ပေါ်တဲ့အခိုက်မှာ အရှိအတိုင်း၊ အမှန်အတိုင်း သိအောင်သာ ကြိုးစားကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ရပါကြောင်း…
သရဏဂုံနဲ့ တမလွန် အကောင်းအဆိုး…. ပြီးတော့ ဘာသာခြားနဲ့ ၀ိပဿနာ…
။ အချိန် 1/27/2010 06:23:00 PM
Q. ဘုန်းဘုန်း နေကောင်း ကျန်းမာပါလား ဘုရား..
တပည့်တော်ကို ဦးဇင်းတစ်ပါးက သိချင်တဲ့ အကြောင်းလေးတွေ မေးခိုင်းလို့ပါဘုရား..
၁။ ဗုဒ္ဓဘာသာ တစ်ယောက်က အခြေအနေ တစ်ခုကို မလွန်ဆန်နိုင်လုိ့ တခြားဘာသာဝင် တစ်ဦးအဖြစ် လက်ခံလိုက်ရတယ်၊ အဲဒီလူရဲ့ စိတ်က အဲဒီဘာသာကို မကြည်ညိုပေမယ့် အဲဒီဘာသာရဲ့ ထုံးတမ်းစဉ်လာကို တစ်သက်လုံး လုပ်ခဲ့ရတယ် (ဘယ်လို အလုပ်မျိုးလဲတော့ မမေးလိုက်မိဘူး ဘုရား) ဆိုရင် အဲလိုလူ တစ်ဦးမှာ အပြစ်ဖြစ်နိုင်သလား ဘုရား၊ သရဏဂုံကော ပျက်သွားမလား ဘုန်းဘုန်း၊ တကယ်လို့ သရဏဂုံ ပျက်သွားခဲ့ရင်တောင် အဲဒီလို ပျက်တဲ့အတွက် တမလွန်မှာ အပြစ်ဖြစ်နိုင် (မကောင်းကျိုး ပေးနိုင်) ပါသလား ဘုရား…။
၂။ နောက်မေးခွန်းတစ်ခုက ဒီလိုပါ ဘုရား..။ ဘာသာခြား တစ်ဦးအနေနဲ့ ၀ိပဿနာကို အားထုတ်ချင်နေတယ်၊ ၀ိပဿနာကို စိတ်လည်း ၀င်စားတယ်၊ ၀ိပဿနာဟာ ဘယ်လိုသဘောလဲ သူ သိချင်နေတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာကိုတော့ မကိုးကွယ်ချင်ဘူး..၊ ၀ိပဿနာကိုသာ လိုက်စားချင်တာ..။ အဲလိုလူမျိုးအတွက် ၀ိပဿနာကို စိတ်ပါလက်ပါ အားထုတ်လို့ တရား ရနိုင်ပါသလား ဘုရား၊ ရတနာ သုံးပါးကို မကိုးကွယ်လို့မို့ အနှောင့်အယှက် ဖြစ်နိုင်ပါသလား ဘုန်းဘုန်း..။ တရားအားထုတ်တဲ့ နေရာမှာ များသောအားဖြင့် သရဏဂုံ မတည်ဘဲနဲ့ တရား မရနိုင်ဘူးဆိုတာ ကြားဖူးလို့ပါ… ဆိုပြီး တပည့်တော်ကို မေးလျောက်ခိုင်းပါတယ် ဘုရား..။
ဘုန်းဘုန်း အားတဲ့ အချိန် မေတ္တာရှေ့ထား ဖြေကြားပေးပါဦး ဘုန်းဘုန်း…
A. ဒကာဖိုးသားရေ…တစ်ဆင့်မေးတာဆိုတော့ ဖြေပေးတာကို တစ်ဆင့်ပြောပေးလိုက်ပါဦး..
၁။ အခြေအနေအရ လုပ်နေရတဲ့အတွက် အပြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာကတော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ စိတ်စေတနာ အပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာသဘောအရ စိတ်ကအဓိက ဆိုပေမယ့် ကံသုံးမျိုးမှာ ကာယကံ၊ ၀စီကံတွေနဲ့ ကျူးလွန်မှုမှာလည်း အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိပါတယ်။ အခြားဘာသာရဲ့ ဓလေ့ထုံးစံများအတိုင်း လိုက်လုပ်နေမှုများမှာ လိုက်လုပ်သူရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်၊ ကာယကံမှု၊ ၀စီကံမှု၊ မနောကံမှုများဟာ ရတနာသုံးပါးကို စော်ကားလိုတဲ့ အမှုများ၊ စိတ်စေတနာများ၊ အကုသိုလ်အပြစ် ဖြစ်စရာ လုပ်ဆောင်ချက်များ မပါရင် အပြစ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က စိတ်စေတနာပါရင်တော့ အပြစ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုလိုက်လုပ်နေရတဲ့အတွက် သရဏဂုံပျက်၊ မပျက်ဆိုတဲ့နေရာမှာ သရဏဂုံပျက်ခြင်း အကြောင်းနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ သေဆုံးသွားတဲ့အခါ၊ ရတနာသုံးပါးထက် အခြားအရာများကို ပိုပြီးယုံကြည်အားကိုး ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်တဲ့ အခါတွေဟာ သရဏဂုံပျက်ပါတယ်။ အသက်ရှင်ဆဲ အခိုက်မှာ ရတနာသုံးပါးကို နှလုံးသားထဲမှ အထူးယုံကြည် ကိုးကွယ်နေပေမယ့် အခြားအရာတွေအပေါ်မှာလည်း အခြေအနေအရ ပူဇော်ပသရတာတွေ ရှိပါတယ်။ ရတနာသုံးပါးထက်တော့ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှု မပိုဘူးဆိုရင် သရဏဂုံ မပျက်ပါဘူး။ အကယ်၍ ရတနာသုံးပါးကို စွန့်ပြီး တစ်ခြားအရာတွေကို ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာထက် ပိုပြီးယုံကြည် အားကိုးသွားတဲ့အခါ သရဏဂုံပျက်ပါတယ်။ သရဏဂုံ ပျက်ပေမယ့် ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာကို မစော်ကားဘူး၊ ရတနာသုံးပါးကို မကိုးကွယ်ပေမယ့် အကုသိုလ်ဖြစ်စေမယ့် အလုပ်တွေ မလုပ်ဘူးဆိုရင် အပါယ်မလားနိုင်ပါဘူး။ အလားတူ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မဟုတ်ပေမယ့် မကောင်းတာတွေ မလုပ်ဘဲ ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ နေသွားတဲ့ သူတွေဟာ သေပြီးနောက်မှာ သုဂတိဘ၀ကို လားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သရဏဂုံပျက်ပေမယ့် ရတနာသုံးပါးကို မစော်ကားဘူး၊ အကုသိုလ်အပြစ်တွေ မလုပ်ဘူးဆိုရင် တမလွန်မှာ ကောင်းတဲ့သုဂတိကို ရောက်နိုင်ပါတယ်။
၂။ ၀ိပဿနာ တရားဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ အတွက် သီးသန့် ဟောကြားထားတဲ့ တရားမဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်သူမဆို အားထုတ်လို့ရတဲ့ တရားဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်ဘူး၊ ရတနာသုံးပါးကို မယုံကြည်ဘူး၊ သရဏဂုံမတည်ဘူးဆိုလည်း ၀ိပဿနာ အလုပ်ကို ကောင်းစွာအားထုတ်လို့ ရပါတယ်။ ရတနာသုံးပါးနဲ့ ကံကံရဲ့ အကျိုးကို မယုံကြည်မှု သရဏဂုံကို မလုံခြံမှုကြောင့် အကျိုးပေးမှုတော့ ကွာခြားပါတယ်။ သရဏဂုံနဲ့ ကံကံရဲ့ အကျိုးကို ယုံကြည်မှု သဒ္ဓါတရား မရှိရင်တော့ အရိယာမဂ်ကို ရဖို့မလွယ်လှပါဘူး။ သရဏဂုံမတည်ဘဲ ၀ိပဿနာ တရားအားထုတ်ရင်း အောက်အောက်ဉာဏ်တွေကို ရနိုင်ပေမယ့် သောတာပတ္တိမဂ်ဉာဏ်စတဲ့ အရိယာမဂ်ဉာဏ်တွေတော့ ရဖို့မလွယ်လှပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေ တရားအားထုတ်ရင်းနဲ့ပဲ ၀ိပဿနာ ဉာဏ်အဆင့်ဆင့်အရ အားထုတ်သူကိုယ်တိုင် ရတနာသုံးပါးကို ယုံကြည်မှု သဒ္ဓါတရားတွေ တိုးပွားလာပြီး သရဏဂုံတည်လာတဲ့ အခါမှာတော့ အထက်မဂ်တရားတွေ ရနိုင်ပါတယ်။ ဉာဏ်စဉ်အဆင့်တွေ မြင့်လာတာနဲ့ အမျှစိတ်အစဉ်လည်း ပြောင်းလာပြီး သဒ္ဓါတရားတွေလည်း ခိုင်လာတတ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါမျိုးမှာ ရတနာသုံးပါးကို မကြည်ညိုပါနဲ့ ပြောလည်း သူ့အလိုလို စိတ်ကကြည်ညိုလာ တတ်ပါတယ်။ အဲဒီလို တရားအားမထုတ်မီမှာ ဘာသာခြားတွေ ဖြစ်ပေမယ့် တရားအားထုတ်ရင်း ဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ် သရဂုံမြဲလာသူတွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဆရာကြီး ဦးဂိုအင်ဂါ ပြနေတဲ့ တရားစခန်းမှာဆို ပိုပြီးတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဆရာကြီးဟာ ဘာသာပေါင်းစုံက ဘယ်သူမဆိုလာပြီး တရားအားထုတ်နိုင်အောင် တရားသက်သက်ပြပေးတယ်၊ သရဏဂုံနဲ့ ငါးပါးသီလကို မခံယူပဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ် အားထုတ်နိုင်တယ်ဆိုပြီး လူတိုင်းကို အားထုတ်စေတယ်၊ အားထုတ်ရင်းနဲ့ တရားအနှစ်သာရကို တွေ့ပြီးသူ့အလိုလို သရဏဂုံနဲ့ ငါးပါးသီလ လုံခြုံသွားစေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဘယ်သူမဆို ဗုဒ္ဓဘာသာ ဟုတ်သည်ဖြစ်စေ၊ မဟုတ်သည်ဖြစ်စေ ၀ိပဿနာတရားကို အားထုတ်လို့ရပြီး တရားရမှု၊ မရမှုကတော့ အားထုတ်ရင်း စိတ်အစဉ် ပြောင်းလဲလာမှုနဲ့ သဒ္ဓါတရား အားကောင်းလာမှု၊ သရဏဂုံနဲ့ ကံငါးပါး လုံခြုံလာမှု အပေါ်လိုက်ပြီး ကွာခြားနိုင်ပါတယ်။ သေချာတာကတော့ သရဏဂုံ မတည်ပေမယ့် ၀ိပဿနာ အလုပ်လုပ်နေရင် အရိယာမဂ်ကို မရနိုင်တာတောင် ဒီဘ၀ချမ်းသာမှုနဲ့ သုဂတိဘ၀ ရောက်စေမှုကတော့ အကျိုးဖြစ်စေပါတယ်။ တရားအားထုတ်ရင်း သဒ္ဓါတရားအားကောင်းလာကာ သရဏဂုံပါ ခိုင်မြဲလာ၊ တည်လာတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီဘ၀မှာပဲ တရားရနိုင်ပါတယ်။
။ အချိန် 1/26/2010 08:52:00 AM
။ အချိန် 1/24/2010 11:51:00 AM
။ အချိန် 1/23/2010 09:45:00 AM
။ အချိန် 1/21/2010 04:23:00 PM
ငယ်ငယ်ကတည်းက ရထားသည့် ဆုံးမစကားလေး ဖြစ်ပါ၏။ မိမိက အစဉ်ကောင်းခဲ့သော်လည်း အကြောင်းမညီညွတ်သဖြင့် တစ်ခါမလိုက်လျောမိသည့်အခါ၊ ထိုမလိုက်လျောခဲ့မှုကြောင့် ယခင်ကောင်းခဲ့သည် များကိုပါမေ့ပြီး အပြစ်ပြောခံ အကဲ့ရဲ့ခံရသည်များနှင့် ကြုံရသည့်အခါ အထက်ပါ ဆုံးမစကားလေးကို ရွတ်ကာ မိမိကိုယ်ကိုမိမိ ပြန်လည်ဆုံးမနေဖြစ်၏။ ထို့အတူ မိမိနှင့် နီးစပ်ရာများကိုလည်း ထိုဆုံးမစကားလေးကို ရွတ်ဆိုကာ “လူ့ရဲ့စိတ်၊ လူ့ရဲ့သဘောဟာ ဒီလိုပဲရှိတတ်တယ်၊ ဘယ်လောက်ပဲ ကောင်းခဲ့ကောင်းခဲ့ သူ့အလိုအတိုင်း တစ်ခါလောက် မလိုက်လျောလိုက်ရင် အကုန်အဆိုးဖြစ်ကုန်တာပဲ“ဟု ဆုံးမပေးနေမိ၏။
မှန်၏။ လောကတွင် အပေါင်းသင်းရ အခက်ဆုံး သတ္တ၀ါကား လူဟူသော သတ္တ၀ါပင်ဖြစ်၏။ လူသည် အသိပညာ ရှိသည်နှင့်အမျှ ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲမှုလည်း အားကြီး၏။ လူသည် အတ္တကြီးသည်နှင့်အမျှ တစ်ကိုယ်ကောင်း ဆန်သူလည်း ဖြစ်၏။ လူသည် သူတပါးကို ချီးမွန်းပေးရန် ၀န်လေးသော်လည်း ကဲ့ရဲ့ဖို့ရန်ကား အလွန်အားကောင်း၏။ လူသည် သူတစ်ပါးအပေါ် ၀မ်းမြောက်ပေးသည့် မုဒိတာတရား ခေါင်းပါးသော်လည်း မနာလိုသည့် ဣဿာတရားကား အလွန်အားကြီးလှ၏။ လူသည် သူတစ်ပါးအပေါ် အကောင်းမြင်ပေးရန် ခက်သော်လည်း အဆိုးမြင်ရန်ကား မြန်လွန်းလှ၏။ လူသည် သူတစ်ပါး၏ အပြစ်ကိုပြောရန် အလွန်မြင်တတ်သော်လည်း မိမိ၏ အပြစ်ကို ၀န်ခံရန်ကား အလွန်ခက်ခဲတတ်၏။ လူ၏ ပါးစပ်သည် အကောင်းပြောရန် ခက်သော်လည်း အဆိုးပြောရန်ကား လွယ်လွန်းလှ၏။ ထို့ကြောင့် လူသည် လောကတွင် အဆင့်အမြင့်ဆုံး သတ္တ၀ါဖြစ်သော်လည်း လူစိတ်ပျောက်သည့်အခါတွင်ကား အယုတ်မာဆုံး၊ အနိမ့်ကျဆုံးသတ္တ၀ါဟု ဆိုကြခြင်းဖြစ်၏။
လူ့လောကတွင် နေကြသည့်သူများ ဖြစ်သဖြင့် လူအမျိုးမျိုး စရိုက်အမျိုးမျိုးရှိသည့် လူများနှင့် ကြုံတွေ့ နေကြရမည်သာ ဖြစ်၏။ ထိုအမျိုးမျိုးသော လူများအတွင်း၌ မိမိအတွက်သာကြည့်ပြီး အခြားသူများအတွက် မစဉ်းစားသည့် သူများရှိ၏။ မိမိအလိုရှိသည်ကိုသာ ရအောင်ယူတတ်ပြီး တစ်ဖက်သူအပေါ် စဉ်းစားပေးခြင်း မရှိသောသူများ ရှိ၏။ ထိုသို့သဘောရှိသော သူများနှင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရသည့် သူများသည်လည်း အလွန်အခက် ကြုံရတတ်၏။ မကင်းရာ မကင်းကြောင်းဖြစ်သဖြင့် ကြိုးစားပေါင်းသင်း နေရသော်လည်း စိတ်ပါလက်ပါ မရှိလှပေ။ ထို့ကြောင့် တစ်ခါတစ်ရံ မိမိအကြောင်းနှင့်မိမိ ထိုသူတို့ အလိုရှိသည်များကို မလိုက်လျောမိတတ်ဘဲ ရှိတတ်၏။ ထိုအခါ အမြဲရယူနေကျဖြစ်သည့် အရာကို မရသည့်အခါ ယခင်ယခင်များက လိုက်လျောခဲ့မှုများကို မေ့ပျောက်ကာ တစ်ခါတစ်ရံ မလိုက်လျောမိသဖြင့် ရန်သူသဖွယ် ဆက်ဆံခြင်းကို ခံရတတ်သည်များလည်း ရှိ၏။ ထိုသို့ အကြိမ်ကြိမ်လိုက်လျောခဲ့စဉ်က မည်သည့်ပြဿနာမျှ မဖြစ်ဘဲ တစ်ခါမလိုက်လျောမိသဖြင့် ရန်သူသဖွယ် ဆက်ဆံခံရ၊ အထင်သေးခဲ့ရသည့် သူများရှိသဖြင့် ပညာရှိများက “လူ့အလိုနတ်မလိုက်နိုင်”ဟု ဆိုကြခြင်းဖြစ်၏။ လူ၏အကြိုက်ကို မည်မျှပင်လိုက်နေသော်လည်း အလိုပြည့်သည်ဟူ၍ မရှိတတ်ကြောင်း သတိပေးတော်မူခြင်း ဖြစ်၏။ မိမိက မည်မျှပင် အကြိုက်လိုက်ပေးသော်လည်း တစ်ခါတစ်ရံ မိမိအကြောင်းနှင့်မိမိ မလိုက်လျောနိုင်သည့်အခါ ရန်သူသဖွယ် ဆက်ဆံခံရတတ်သဖြင့် အများအကြိုက် လိုက်တတ်သည့်သူများ သတိထားသင့်ကြောင်း ဆုံးမတော်မူခြင်း ဖြစ်၏။
မှန်၏။ လူ၏အကြိုက်ဟူသည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး မတူညီကြသဖြင့် တွေ့သမျှလူများ၏ အကြိုက်ကိုလိုက်ပြီး နေထိုင်ဆက်ဆံ နေရလျှင် ဆုံးနိုင်မည် မဟုတ်တော့ပေ။ ထိုသို့ အကြိုက်ကိုလိုက်ပြီး နေပေးသော်လည်း လူဟူသည် အမြဲပြောင်းလဲနေတတ်သဖြင့် မနေ့ကပုံစံမျိုးနှင့် ယနေ့ပုံစံမျိုး မတူလျှင်ပင် တစ်မျိုးမြင်တတ်သည့် သဘောရှိ၏။ မိမိက ပုံမှန်ဆက်ဆံ နေထိုင်ပေးနေသော်လည်း တစ်ဘက်သူမှာ အလိုမကျ ဖြစ်နေတတ်သည်လည်း ရှိ၏။ သေချာသည်မှာ လူသည် မလိုတစ်မျိုး လိုတစ်မျိုး ဖြစ်နေသည့် သတ္တ၀ါသာ ဖြစ်၏။ သဘောကျကျေနပ်နေလျှင် ဘာပဲလုပ်လုပ် အကောင်းမြင်နေတတ်ပြီး၊ အလိုမရှိတော့လျှင်ကား အသေးအဖွဲ့ကအစ အပြစ်မြင်ကာ ပုံကြီးချဲ့တတ်၏။ မိမိနှင့် အဆင်ပြေနေသည့် အချိန်တွင် အမျိုးမျိုး ချီးမွန်းထောမနာပြုပြီး အဆင်မပြေသည့် အချိန်တွင်ကား ငယ်ကျိုးငယ်နာမှအစ ဖော်ထုတ်ကာ သွားပုတ်လေလွင့် ပြောလေ့ရှိတတ်၏။ ထို့ကြောင့် လောကတွင် ဆက်ဆံပေါင်းသင်း၍ အခက်ဆုံး သတ္တ၀ါကား လူဟုဆိုကြခြင်းဖြစ်၏။
စာရေးသူနှင့် သိသည့် ဒကာလေးတစ်ဦးရှိ၏။ ထိုဒကာလေးလည်း အလားတူ အဖြစ်မျိုးနှင့် ကြုံရသဖြင့် စာရေးသူထံ ရင်ဖွင့်ပြောဆိုဖူး၏။ ယခင်က သူနှင့်အတူ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့ဖူးသော သူတစ်ယောက်က တစ်စုံတစ်ခုသော အကြောင်းကြောင့် အခန့်မသင့်ဖြစ်ကာ မခေါ်မပြော ရှိနေချိန် သူ့ကွယ်ရာတွင် သူ့မကောင်းကြောင်းများကို လျှောက်ပြောလေ့ရှိကြောင်း၊ မဟုတ်မမှန် တစ်ဘက်သတ် အပုတ်ချပြောနေသဖြင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သူများကြားတွင် သူသာမကောင်းဖြစ်ရကြောင်း၊ သို့ဖြစ်၍ ဒကာလေးက သူလည်းပြန်လည်တုံ့ပြန်ပြီး ပြောဆိုလိုက်လျှင် ကောင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း စာရေးသူကို ဖွင့်ဟတိုင်ပင်ဖူး၏။ စာရေးသူက မလုပ်ရန်သာ ပြန်ပြောလိုက်၏။ “ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်လည်းသူနှင့် မထူးသည့် ပုံစံမျိုး ဖြစ်သွားတတ်ကြောင်း၊ အချိန်တန်လျှင် သူ့အလိုလို ပြီးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တုံ့ပြန်ခြင်းအားဖြင့် သံသရာ ရှည်ရုံသာရှိကြောင်း၊ သူဘာပြောပြော သူပြောသမျှ စကားများကို လိုက်ပြီးမခံစားမိဖို့လိုကြောင်း၊ အချိန်တန်လျှင် သူသည်ဤကဲ့သို့သော လူစားမျိုးဖြစ်သည်ကို အပြောခံရသည့်သူများ ကိုယ်တိုင်သိရှိလာသည့်အခါ သွားပုတ်လေလွင့် ပြောတတ်သည့်သူ့ကို အများက ရှောင်ဖယ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ကိုယ့်အပေါ်လည်း အမြင်ကြည်လင်သွားကြမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ အဓိကကတော့ ယခုအချိန်တွင် ထိုသို့သော သွားပုတ်လေလွင့် အပုတ်ချပြောဆိုမှုများကို ခေါင်းထဲတွင် ထည့်မထားဘဲ၊ သူနှင့် ထိပ်တိုင်မတွေ့အောင် နေလိုက်ခြင်းကသာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်း” စသည်ဖြင့် အကြံပြုဖြစ်လိုက်၏။
စင်စစ် ထိုသို့သော အခြေအနေများသည် လူ့လောကတွင် အများအပြားရှိ၏။။ မိမိတစ်ဦးတည်းမဟုတ်။ မိမိကဲ့သို့ပင် အလားတူ အဖြစ်အပျက်မျိုး ကြုံတွေ့သူများ အများအပြားရှိ၏။ မိမိနှင့် အဆင်ပြေနေချိန်တွင် အစစအရာရာ အကောင်းချည်းဖြစ်ခဲ့သော်လည်း အဆင်မပြေသည့် အချိန်တွင်ကား အဆိုးချည်းသာ ဖြစ်နေတတ်၏။ ဤသည်မှာ လူ၏သဘောပင်ဖြစ်၏။ ထို့သို့ အဆင်ပြေချိန် အကောင်းပြောပြီး မတည့်သည့်အချိန် အဆိုးပြောခံရခြင်းသည် လောကဓံတရားပင်ဖြစ်၏။ ချီးမွမ်းခြင်း ကဲ့ရဲ့ခြင်းသည် လူတိုင်းတွေ့ကြုံရမည့် သဘော ဖြစ်၏။ လောကတွင် အတုမရှိ အလုံးစုံ ပြည့်စုံတော်မူသည့် ဘုရားရှင်ပင်လျှင် ချီးမွမ်းခြင်း၊ ကဲ့ရဲ့ခြင်းကို ခံရသေး၏။ မိမိတို့အတွက်ကား အထူးအဆန်း မဟုတ်လှပေ။ သေချာသည်မှာ ထိုချီးမွမ်းခြင်း၊ ကဲ့ရဲ့ခြင်းများသည် အမြဲတစ်သမှတ်တည်း ဖြစ်မနေခြင်းဟူသည့် အချက်ပင်ဖြစ်၏။ မည်သူမျှ ချီးမွမ်းခံရခြင်း တစ်ခုတည်း ရှိနေသည် မဟုတ်သကဲ့သို့ ကဲ့ရဲ့ခံရခြင်း တစ်ခုတည်းလည်း မဟုတ်ပေ။ ယနေ့ချီးမွမ်းခံရသော်လည်း မနက်ဖြန်တွင် အကဲ့ရဲ့ခံရသည်နှင့် ကြုံတွေ့ရတတ်၏။ ယနေ့ အကောင်းအပြောခံ နေရသော်လည်း မနက်ဖြန်တွင်ကား မကောင်းအပြောခံရတတ်၏။ လောကဓံသဘောကား အတက်အကျ၊ အနိမ့်အမြင့် အမြဲရှိနေခြင်းပင် ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် ဘုရားရှင်က အတုလအား “ချစ်သား အတုလ… ဤကဲ့ရဲ့ခြင်းသည် ရှေးရိုးအစဉ်အလာပေတည်း။ ဤကဲ့ရဲ့ခြင်းသည် ယခုမှ ဖြစ်သည်မဟုတ်။ ဆိတ်ဆိတ်နေသူကိုလည်း ကဲ့ရဲ့ကုန်၏။ များစွာဟောပြောသူကိုလည်း ကဲ့ရဲ့ကုန်၏။ နှိုင်းချိန်၍ပြောသူကိုလည်း ကဲ့ရဲ့ကုန်၏။ လောက၌ အကဲ့ရဲ့လွတ်သော သူမည်သည် မရှိ။ လုံးဝအကဲ့ရဲ့ ခံရသူ၊ လုံးဝအချီးမွမ်း ခံရသူမည်သည် ရှေးကလည်း မရှိခဲ့ဘူး။ နောင်လည်း ရှိမည်မဟုတ်။ ယခုလည်း မရှိ။” ဟု မိန့်တော်မူခြင်း ဖြစ်၏။ မြတ်ဗုဒ္ဓပင်လျှင် အကဲ့ရဲ့ခံရသဖြင့် လောက၏ ကဲ့ရဲ့ခြင်း ချီးမွမ်းခြင်း သဘောသည် မည်သူမျှ မလွတ်သည်ကို ဘုရားရှင်၏ ဤမိန့်တော်မူချက်က သက်သေပြနေ၏။ ဆိုလိုသည်မှာ ကဲ့ရဲ့ခြင်း၊ ချီးမွမ်းခြင်းသည် လောကသားတိုင်း ကြုံတွေ့နေရသဖြင့် လူသားတို့သည် မိမိတို့အပေါ် မကောင်းအပြောခံ၊ အပုတ်ချခံရသည့်အခါ မတုန်မလှုပ် ခံနိုင်ရည်ရှိစေရန် ကြိုးစားကြဖို့ ဆိုလိုပါ၏။
အကယ်၍ ထိုသို့ အကဲ့ရဲ့ခံရမည်ကို ကြောက်သဖြင့် လူ့အကြိုက် လိုက်နေမည်ဆိုပါက အလိုပြည့်နိုင်ကြမည် မဟုတ်ဘဲ အကြိုက်လိုက်နေရသည့် မိမိသည်သာ ဒုက္ခများနှင့် ကြုံတွေနေတတ်ပေ၏။ မိမိလုပ်ရပ်ကြောင့် မိမိသည်သာ အပြစ်ဖြစ်စေသည်နှင့် ကြုံတွေ့ရတတ်၏။ အချို့သူများသည် အကြောင်းအကျိုး မခွဲခြားတတ်သဖြင့် သူ့အတွက် လုပ်ပေးသည်ကိုပင် အဆိုးမြင်ကာ အပြစ်ပြောလေ့ရှိသဖြင့် မိမိသည်သာ လုပ်ပေးသင့်၊ မလုပ်ပေးသင့်၊ အကြိုက်လိုက်သင့်၊ မလိုက်သင့် စဉ်းစားသင့်ပေ၏။ ခဏတာ တွေ့ကြုံလာသည့်အခိုက်တွင် အားလုံးနှင့် အဆင်ပြေစေရန်အတွက် လူအများ၏ အကြိုက်ကို လိုက်ပြီးနေကြလျှင် မိမိအကျိုးများသာ ဆုတ်ယုတ်နေတတ်၏။ လူ့အကြိုက်လိုက်ပြီး သူလုပ်သည့် အလုပ်ကို မိမိပါလိုက်လုပ်နေပါက သူမကောင်းလျှင် မိမိပါမကောင်းဖြစ်တတ်၏။ ထို့ကြောင့် လူ့စိတ်၊ လူ့သဘောသည် မည်မျှပင် အကြိုက်လိုက်ပေးသော်လည်း ကျေနပ်သည်ဟူ၍ မရှိတတ်သဖြင့် အတိုင်းအတာ တစ်ခုအနေဖြင့်သာ လိုက်လျောသင့်ကြပေ၏။ မိမိက အမြဲအကြိုက်လိုက်နေရာမှ တစ်ကြိမ်တစ်ခါ မလိုက်မိသည့်အခါတွင် ရန်သူကဲ့သို့ ပြုမူဆက်ဆံတတ်သဖြင့် လူ့အကြိုက်လိုက်သူများသည် မိမိ၏ ပစ္စုပ္ပန်အကျိုး၊ သံသရာအကျိုးများဖြင့် ရင်း၍ကား မလိုက်သင့်လှပေ။
အချုပ်အားဖြင့် လူစိတ်၊ လူ့သဘောသည် နားလည်လက်ခံရန် ခက်ခဲသည့်အပြင် ကျေနပ်နှစ်သက်အောင် လိုက်လုပ်ပေးရန်လည်း ခက်ခဲတတ်သဖြင့် မိမိတို့အနေဖြင့် လိုသည်ထက်ပို၍ အစမလုပ်ကြရန်နှင့် အစလုပ်၍ လိုက်လျောမိပါက အကြောင်းမညီညွတ်သဖြင့် တစ်ခါမလိုက်လျော မိသည့်အခါ ရန်သူသဖွယ် မှတ်ယူတတ်သည်ကို သတိပြုရန် လိုအပ်ပေ၏။ လူ့အကြိုက်ကိုလိုက်ကာ မိမိတို့၏ အကျင့်သီလများကို ပျက်ဆီးသည်အထိ မလုပ်ကြရန် လိုအပ်ပေ၏။ အရက်သမားအကြိုက်ကို လိုက်ကာ မိမိပါ အရက်သောက်သည့် အကျင့်ဖြစ်သည်အထိ မလိုက်လျောသင့်ပေ။ ဖဲသမားအကြိုက်လိုက်ကာ မိမိပါ ဖဲရိုက်တတ်သည့် အကျင့်ဖြစ်သည်အထိ မလိုက်လျောသင့်ပေ။ စင်စစ် လူသည်အကြိုက်လိုက်နေလျှင် ကောင်းနေသော်လည်း အကြိုက်မလိုက်သည့်အခါ မကောင်းမြင်တတ်၊ အပြစ်မြင်တတ်သဖြင့် လူ့သဘောကို ကောင်းစွာနားလည်ပြီး မိမိအကျိုးနှင့်ယှဉ်ကာ မလိုက်သင့်သည့်အခါတွင် မလိုက်ကြရန် နားလည်ထားသင့်၏။ ထိုသို့ အကြိုက်မလိုက်သဖြင့် တစ်ဘက်သူက မည်သို့သော တုံ့ပြန်မှုမျိုးဖြင့် ပြန်လည်တုံ့ပြန်ပါစေ “ဒါဟာ… လူ့စိတ်၊ လူ့သဘောပါပဲ..”ဟု နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်၍ မိမိကိုယ်တိုင်သာ အပြစ်မဖြစ်အောင်၊ သက်သောင့်သက်သာ ဖြစ်အောင် နေနိုင်ရန် ကြိုးစားသင့်ပေ၏။ ဤသို့သော နေနည်းသည်သာ လူတို့၏ စိတ်သဘောကို ရှောင်လွဲ၍ နေခြင်းဖြစ်သဖြင့် မဆုံးနိုင်သည့် လူ့သဘောကို အဆုံးလိုက်မနေကြဘဲ ဖြစ်သမျှ အခြေအနေအပေါ်တွင်သာ အပြစ်မဖြစ်အောင် နေကြည့်ကြပါဟု တိုက်တွန်းလိုက်ရပေ၏။
။ အချိန် 1/20/2010 04:21:00 PM
မကြာသေးမီက ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ဘာသာတရားအဖြစ် ကမ္ဘာ့ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များက တစ်ညီတစ်ညွတ်တည်း အတည်ပြုမဲပေး သတ်မှတ်ပြီးနောက်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကမ္ဘာတစ်ဝန်း စိတ်ဝင်စားမှုများ ပိုမိုတိုးပွားလာခဲ့ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အမှန်သစ္စာတရားကို ရှာဖွေကျင့်ကြံ လိုက်နာသူများလည်း များပြားလာခဲ့ပါတယ်။ စစ်မှန်တဲ့ သစ္စာတရားဆိုတာ ကမ္ဘာပျက်သော်လည်း မပျက်ဘဲ တည်ရှိနေပြီး အချိန်မရွေး ပြန်လည်ထွန်းကားလေ့ ရှိတယ်ဆိုတာ ဗုဒ္ဓဘာသာက အထင်အရှားပြခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အသိဉာဏ်ရှိသူများ၊ အမှန်သစ္စာကို လိုလားသူများ၊ အမှားအမှန်ကို ခွဲခြားတတ်သူများက ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အမှန်သစ္စာကို ကိုယ်တိုင်လိုက်နာ ကျင့်ကြံပြီး တစ်ဆင့်ပြန်လည် ဖြန့်ဝေလာကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် အဲဒီလို သစ္စာတရားများ ပြန့်ပွားထွန်းကားနေချိန်မှာပဲ မိုက်လုံးကြီးသူများ၊ အမှားအမှန်ကို မခွဲခြားတတ်သူများ၊ အသိဉာဏ် မရှိသူများရဲ့ မနာလို မရှုစိမ့်ဖြစ်မှုများ၊ တိုက်ခိုက်ရှုတ်ချမှုများကလည်း တဖြည်းဖြည်း များပြားလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အမြင့်ရောက်လေ လေများများအတိုက်ခံရလေ ဆိုသလို စစ်မှန်တဲ့ သစ္စာတရားများ ပိုမိုထွန်းကားလေလေ ထိုအမှန်တရားကို လက်မခံ အမှားကို ဇွတ်မှိတ်ကာ အမှန်လုပ်သူများရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုများလည်း များများလေလေ ဖြစ်ပါတယ်။
ခုတလော အင်တာနက် လွတ်လပ်မှုကို အသုံးချကာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း ဆဲဆို တိုက်ခိုက်လာတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်အချို့ ရှိလာတာကို တွေ့နေရပါတယ်။ အဲဒီသူတွေဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ဟောကြားချက် မဟုတ်တာတွေကို အဟုတ်လုပ်ပြီး ယုတ်မာရိုင်းစိုင်းတဲ့ အသုံးအနှုန်းများဖြင့် ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ဂ်များ ဖန်တီးရေးသားကာ သူတို့ရဲ့ ဘလော့ဂ်လိပ်စာကို ဗုဒ္ဓဘာသာ အင်တာနက် စာမျက်နှာများရဲ့ စီဘောက်စ်များ၊ အီးမေးလ်မျာမှ တစ်ဆင့် ဖြန့်ဝေတိုက်ခိုက်နေတာကို တွေ့နေရပါတယ်။ ဒါကို ဘာသာတရားအပေါ် စော်ကားလာတဲ့အတွက် မခံမရပ်နိုင် ဖြစ်နေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များက အဲဒီဘလောဂ်ကိုသွားပြီး ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ ရဟန်းတော်များရဲ့ အင်တာနက်စာမျက်နှာများတွင် ၀င်ရောက်ရေးသားကာ အကူအညီများ တောင်းခြင်း၊ အီးမေးလ်များဖြင့် တစ်ဆင့်ပြန်လည် ဖြန့်ဝေကာ သူတို့ကို အရေးယူပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံခြင်းများ ပြုလုပ်နေတာတွေလည်း တွေ့နေရပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များရဲ့ ဘာသာတရားအပေါ် ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှု၊ အမှန်တရားကို အလေးထားမှု၊ သစ္စာတရားများ အမှန်တည်ရေးကို လိုလားမှုများဟာ လေးစားစရာကောင်းလှပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်ရံ ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခြင်းအားဖြင့် မီးလောင်ရာ လေပင့်ဖြစ်တာတွေလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ သူတို့ကို အရေးတယူ ပြန်လည်တုံ့ပြန်နေတဲ့ အတွက် အဲဒီသူများဟာ လူအများရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို ပိုမိုရရှိလာပြီး သူတို့ရဲ့ ဘလောဂ်ကို ၀င်ရောက်ဖတ်ရှု လေ့လာသူများလည်း ပိုမိုများပြားလာတတ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ သူတို့အပေါ် ပြန်လည်တုံ့ပြန်မှု များကြောင့် တစ်ဆင့်တစ်ဆင့် သူတို့ရဲ့ စာမျက်နှာကို ကြေငြာပေးရာ ရောက်သလို ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ကျော်ကြားမှုဟာ ကောင်းတဲ့ကျော်ကြားမှု ရှိသလို မကောင်းတဲ့ ကျော်ကြားမှုလည်း ရှိတတ်တဲ့အတွက် သူတို့ကတော့ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ကျော်ကြားကျော်ကြား သူတို့ရဲ့ တိုက်ခိုက်မှု အောင်မြင်ဖို့ အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ကား ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ အနေနဲ့ ဘာသာတရားအပေါ် တိုက်ခိုက်လာမှုများအား သည်းခံမှုကို အသုံးပြုပြီး လစ်လျူရှုခြင်း ဥပေက္ခာတရားနဲ့သာ ပြန်လည်တုံ့ပြန်ကြဖို့ လိုပါတယ်။ အချိန်တန်ရင် သူ့အလိုလို ပြီးသွားပါလိမ့်မယ်လို့ သဘောထားပြီး တိုက်ခိုက်လာမှုများကို ဘယ်လိုမှ ပြန်လည်တုံ့ပြန်မှု မပြုကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ အမှန်သစ္စာတရားဟာ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ဘယ်တော့မှ မကျရှုံးတတ်ပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘာသာရေး စာမျက်နှာ ပိုင်ရှင်များ အနေဖြင့်လည်း မိမိတို့ စီဘောက်စ်များမှာ ၀င်ရောက်လာတဲ့ ဒီလိုတိုက်ခိုက်ရေးသားမှုများ၊ စီဘောက်စ်မှာ ထားသွားတဲ့ လိပ်စာများကို သူတို့ဘလော့ဂ်ကို သွားရောက်စရာ မလိုဘဲ ကိုယ့်စီဘောက်စ်မှာ ရှိနေတာတွေကိုပဲ ချက်ချင်းဖျက်ပစ်ဖို့၊ အီးမေးလ်များမှာ ၀င်ရောက်လာရင်လည်း ချက်ချင်းဖျက်ပစ်ဖို့၊ သူတို့ရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကို မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ပြီး ဒီလိုဘလော့ဂ်မျိုး ရှိတယ်ဆုိုတာ သိရအောင် ကိုယ့်အချင်းချင်းကိုတောင် တစ်ဆင့်ပြန်လည် ဖော်ဝါ့ထ်လုပ်တာမျိုး မလုပ်ကြဖို့၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုတိုက်ခိုက်လာတဲ့ ဘလော့ဂ် ဒါမှမဟုတ် စာလို့သိရင် သိသိချင်း ဖတ်တောင်မဖတ်ဘဲ ဖျက်ပစ်ကြဖို့ အထူးလိုအပ်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် တိုက်ခိုက်လာတဲ့အခါ တိုက်ခိုက်လာတဲ့အပေါ်ကို ဘာမှပြန်လည် တုံ့ပြန်မှုမပြုဘဲ မသိချင်ယောင်ဆောင်ကာသာ လစ်လျူရှုလိုက်ကြဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်သူမှ သူ့ကို အရေးတယူ မရှိဘူးဆိုတာသိရင် နောက်ဆုံးသူ့ဖာသာသူ ကျဆုံးသွားပါလိမ့်မယ်။ မကျလို့ ဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေတော့လည်း သူ့ဟာသူ တိုက်ခိုက်နေပါစေပေါ့။ ကိုယ့်အနေနဲ့ ဘာမှမဖြစ်အောင်၊ ဘာမှ မခံစားရအောင် နေလိုက်ရုံပါပဲ။ ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်လုပ်နေရုံပါပဲ။ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ အမှန်သစ္စာတရားကိုသာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် လိုက်နာကျင့်သုံးကာ ကိုယ့်ရဲ့သဒ္ဓါတရားကို ခိုင်မြဲအောင် လုပ်နေရုံပါပဲ။
တကယ်တော့ ဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဘာသာတရားရဲ့ အဆုံးအမကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် လိုက်နာကျင့်သုံးမှု မပြုနိုင်သေးပေမယ့် ဘာသာတရားရဲ့ တန်ဘိုးအစစ်အမှန်ကိုတော့ ရင်ထဲနှလုံးသားထဲကကို လက်ခံထားပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုပဲ ဗုဒ္ဓဘာသာ မကောင်းကြောင်း ပြောဆိုပုတ်ခတ်ရေးသား နေပါစေ ဗုဒ္ဓဘာသာအပေါ် ယုံကြည်ထားတဲ့ ယုံကြည်မှု သဒ္ဓါတရားကတော့ လျော့မသွားပါဘူးဆိုတာ သေချာပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိမိတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာများ အနေဖြင့် ဘာသာတရားအပေါ် ဝေဖန်တိုက်ခိုက်လာမှုများကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ ပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုများ မပြုလုပ်ကြဘဲ ကိုယ့်ဘာသာတရား အဆုံးအမကိုသာ ကိုယ့်သန္တာန်မှာ တည်အောင်၊ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တည်အောင်သာ ကြိုးစားကြဖို့၊ ဝေဖန်တိုက်ခိုက်လာမှုများကို သည်းခံခြင်းလက်နက်ကို အသုံးပြုကာ လစ်လျူရှုနိုင်အောင် ကြိုးစားခြင်းဖြင့်သာ အကောင်းဆုံး ပြန်လည်တုံ့ပြန်ကြဖို့ အထူးတိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ အမှန်သစ္စာတရားကား တိုက်ခိုက်လေလေ ပိုပြီးတောက်ပြောင်လေလေ ဖြစ်နေပါတော့ကြောင်း…
။ အချိန် 1/19/2010 11:13:00 AM
ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေ (၁၇-၁-၂၀၁၀)နေ့က ၁လပိုင်း ၁၅ရက်နေ့မှာ ပြည့်ခဲ့တဲ့ ဘုန်းဘုန်းရဲ့ ၃၅နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူပွဲကို ကျင်း ပပြုလုပ် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆရာတော်အလှူပွဲ ဖြစ် တဲ့အတွက် အားလုံး စည်စည် ကားကား သိုက်သိုက် မြိုက်မြိုက် မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင် ရှိခဲ့ ပါတယ်။ ပင့်သံဃာများ၊ သီလရှင် ဆရာလေးများနဲ့ မြန်မာ၊ ကိုရီးယား ဧည့်ပရိတ်သတ်များ စုစုပေါင်း ၁၅၀ကျော်ကျော် လာရောက်ပူဇော်ပြီး တရားဓမ္မနာယူကာ ပျော်ပျော်ပါးပါး စားရင်း စကားပြောရင်းဖြင့် အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြုလုပ် ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီအလှူပွဲဟာ ဆရာတော်ရဲ့ မွေးနေ့အလှူပွဲလို့ အမည်တပ်ခဲ့ပေမယ့် ကိုရီးယားရောက် မြန်မာဒကာ၊ ဒကာမများနဲ့ ကိုရီးယား ဒကာဒကာမ အချို့ရဲ့ အလှူပွဲပဲ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အဲဒီနေ့က နေ့လယ်စာအတွက် ဆွမ်းလှူတာက ယုံရှင်းစက်မှုဇုံမှာ လာရောက်အလုပ် လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ မြန်မာ ရွှေညီအစ်ကိုများက လှူဒါန်းတာဖြစ်ပြီး အချိုလက်ဘက်ရည်အတွက် ဂျိလျန်းစက်ရုံက ရွှေညီအစ်ကိုများက လှူဒါန်းတာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ပင့်သံဃာများနဲ့ ဆရာလေးများအတွက် ခရီးစရိတ်အပါအ၀င် န၀ကမ္မအလှူများကို လှူဒါန်းတာက ဘုန်းဘုန်းရဲ့ ဓမ္မပူဇာတွေထဲက လှူတာဆိုပေမယ့် ဘုန်းဘုန်းရဲ့ ဓမ္မပူဇာဆိုတာကလည်း မြန်မာများ၊ ကိုရီးယားများကို တရားဓမ္မ ဟောပြောပေးတဲ့အတွက် ဒကာဒကာမများရဲ့ ပူဇော်လှူဒါန်းမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတာဆိုတော့ ဒကာဒကာမများရဲ့ အလှူပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒီနေ့ စုပေါင်းအလှူရေစက်ချ တရားနာတဲ့အခါမှာတော့ ဘုန်းဘုန်းက ဘုန်းဘုန်းရဲ့ မွေးနေ့အလှူဆိုပေမယ့် အများက စုပေါင်းကျင်းပပေးတဲ့ အလှူပွဲဖြစ်လို့ “သူကြီးဘုရား ရွာသားကောင်းမှု”ဆိုတဲ့ အမည်လေးနဲ့ တရားတစ်ပုဒ် ဟောကြားပေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ပရိတ်ပဋ္ဌာန်း ရွတ်ဖတ်ရာတွင် အသံမထွက်ဘဲ ရွတ်ကောင်း၊ မရွတ်ကောင်း…
။ အချိန် 1/18/2010 06:47:00 AM
ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်နှင့် မေတ္တာသုတ်ရွတ်ဖတ် ပူဇော်ရာတွင် အသံမထွက်ပဲ ရွတ်ကောင်းပါလားဘုရား…
A. ဒီနေရာမှာ ရွတ်ဖတ်ပူဇော်သူရဲ့ စိတ်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ရွတ်ဖတ်မှုကို လိုက်ပြီးပြောဖို့ လိုပါတယ်။ အကယ်၍ ကိုယ်က တစ်စုံတစ်ယောက်အတွက် ဘေးဥပါဒ် အန္တရာယ်အပေါင်းမှ ကာကွယ်ပေးလိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို “အလကားနေတာထက်စာရင် စိတ်မှာဗုဒ္ဓဓမ္မများကို အာရုံပြု ရွတ်ဆိုနေတာက ပိုကောင်းပါတယ်”ဆိုတဲ့ ကုသိုလ်ရလိုတဲ့ အတွေးနဲ့ စိတ်ကနေ အာရုံပြု ရွတ်ဆိုနေတယ်ဆိုရင် အသံမထွက်ဘဲ ရွတ်ဆိုကောင်းပါတယ်။ ကုသိုလ်ရပါတယ်။ မနောကံ ကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီလိုမှ မဟုတ်ဘဲ တစ်စုံတစ်ယောက်အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ရွတ်ဆိုပေးတာဆိုရင်တော့ အသံထွက်ပြီး ရွတ်ဆိုပေးရပါတယ်။ အဲဒီလို ရွတ်တဲ့အခါမှာလည်း ဒီပရိတ်ပဋ္ဌာန်းရဲ့ အစွမ်းများ ပိုပြီးအာနိသင် ရှိစေဖို့ ပရိတ်ပဋ္ဌာန်း ရွတ်သူနဲ့ ပရိတ်ပဋ္ဌာန်းနာသူတို့ ပြည့်စုံရမယ့် အချက်တွေ ပြည့်စုံအောင် ရွတ်ဖတ်နာယူမှ ပိုပြီးအကျိုး အာနိသင် ဖြစ်စေပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဓမ္မဆိုတဲ့ အတွေးယုံကြည်မှုနဲ့ ရွတ်နေတဲ့အတွက် ကုသိုလ်ကတော့ ဖြစ်နေပြီးသားပါ။ ဒါပေမယ့် အကျိုးအာနိသင် ထက်စေဖို့အတွက်တော့ ရွတ်သူနာသူ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အင်္ဂါရပ်တွေ ပြည့်စုံမှ ပိုပြီးအစွမ်းထက်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနေရာမှာ ပရိတ်ပဋ္ဌာန်း ရွတ်သူနဲ့ နာသူတို့ပြည့်စုံရမယ့် အင်္ဂါရပ်များကို သိထားဖို့လိုပါတယ်။ ဒါတွေကို လိုက်နာပြီး ရွတ်ဖတ်နာယူကြရင် ပိုပြီးကောင်းပါတယ်။ ဒီအင်္ဂါရပ်များကတော့…
၁။ ပုဒ် ပါဌ် အက္ခရာကို မှန်မှန်ကန်ကန် ရွတ်ဆိုနိုင်ခြင်း၊
၂။ ပရိတ်၊ ပဋ္ဌာန်းရဲ့ အနက်အဓိပ္ပါယ်ကို ကောင်းစွာနားလည်ခြင်း
၃။ ပရိတ်ပဋ္ဌာန်း နာကြားသူများအပေါ်တွင် မေတ္တာ၊ ကရုဏာထားခြင်း ဟူသော ပရိတ်ပဋ္ဌာန်းရွတ်သူ ပြည့်စုံရမယ့် အင်္ဂါ (၃)ပါးနဲ့
၁။ အမေသတ်ခြင်း၊ အဖေသတ်ခြင်း စတဲ့ ပဉ္စာနန္တရိယကံငါးပါးကို ကျူးလွန်ထားမှု မရှိခြင်း
၂။ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူ ရှိသူမဖြစ်ခြင်း
၃။ ယုံကြည်မှုသဒ္ဓါတရားနှင့် ပြည့်စုံခြင်း ဟူသော ပရိတ်ပဋ္ဌာန်းနာသူ ပြည့်စုံရမယ့် အင်္ဂါ (၃)ပါးတို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါက တစ်ခြားသူအတွက် ရည်ရွယ်ရွတ်ပေးတဲ့အခါ အကျိုးအာနိသင် ကောင်းစေဖို့အတွက် ပြောတာပါ။ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ကုသိုလ်ရစေဖို့ အတွက်ကတော့ အသံမထွက်ဘဲ စိတ်မှာအာရုံပြုပြီး ရွတ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ အသံထွက်ပြီး မရွတ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေလေးတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ ခရီးသွားတဲ့အခါ၊ ကား၊ ရထား စသည်စီးတဲ့အခါမျိုးပေါ့။ ဒီလို အခါမျိုးမှာ အသံမထွက်ဘဲ စိတ်ကအာရုံပြု ရွတ်ပွားနေရင်လည်း ကုသိုလ်ဖြစ်နေ၊ ကုသိုလ်ရနေပါတယ်။ အနက်အဓိပ္ပါယ် ဆိုလိုရင်းအထိ အာရုံပြု ရွတ်ဆိုနိုင်မယ်ဆိုရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ အခြေအနေပေးတဲ့အခါ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း ဘေးအန္တရာယ် ကင်းစေလိုတဲ့အခါ ကိုယ့်ရဲ့ပရိတ်ပဋ္ဌာန်း ရွတ်ပွားမှုကို အခြားအခြားသော သူတော်ကောင်းများ နာစေလိုတဲ့အခါ၊ ကိုယ့်စောင့်နတ်စတဲ့ သမ္မာဒေ၀ နတ်ကောင်းနတ်မြတ်များလည်း နာယူစေချင်တဲ့အခါ၊ ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မနောကံကုသိုလ် သုံးမျိုးလုံး ပါစေချင်တဲ့အခါ စတဲ့ အခ်ါမျိုးမှာတော့ အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ပရိတ်ပဋ္ဌာန်းရွတ်သူများ ပြည့်စုံရမယ့် အင်္ဂါရပ်တွေနဲ့ ပြည့်စုံအောင် ကြိုးစားပြီး အသံထွက် ရွတ်ဆိုပေးတာ ပိုကောင်းပါတယ်။ မမြင်နိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ သမ္မာဒေ၀ နတ်ကောင်းနတ်မြတ်များဟာ သူတော်ကောင်းတရားကို နာယူဖို့ စောင့်မျှော်နေတတ်တဲ့အတွက် မရွတ်ခင် ထိုနတ်ဒေ၀ါအပေါင်းကို ပင့်ဖိတ်ပြီး သူတို့ကြားစေနိုင်ဖို့ အသံထွက် ရွတ်ဆိုပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီနေရာမှာ ပြောလိုတာက ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် အခြားဘာရည်ရွယ်ချက်မှ မရှိ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကုသိုလ်ရနေစေဖို့သက်သက် ရွတ်ဆိုတာဆိုရင် အသံမထွက်ဘဲ ရွတ်ဆိုနိုင်ပြီး တစ်စုံတစ်ယောက် အတွက် ရည်ရွယ်ရွတ်ဆိုပေးတာ ဆိုရင်တော့ အချက်အလက် အင်္ဂါရပ်များနဲ့ ပြည့်စုံအောင် အသံထွက် ရွတ်ဆိုပါလို့ ဆိုလိုတာပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သေချာတာကတော့ အသံထွက်သည်ဖြစ်စေ၊ မထွက်သည်ဖြစ်စေ စေတနာရည်ရွယ်ချက် ကောင်းကောင်းနဲ့ ရွတ်ဆိုပူဇော်နေမယ်ဆိုရင် ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ပြီး ကုသိုလ်ကတော့ ရနေတယ်ဆိုတာပါပဲ။
။ အချိန် 1/16/2010 06:52:00 AM
။ အချိန် 1/15/2010 05:42:00 AM
ဒီနေ့ ၁လပိုင်း ၁၅ရက် ဘုန်းဘုန်းမွေးနေ့ပါ။ ဘာလိုလိုနဲ့ ဘုန်းဘုန်းတောင် အသက် ၃၅နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။ သေဖို့ တစ်နှစ်နီးခဲ့လေပြီပေါ့။ ခုခေတ် ယေဘုယျသက်တမ်းအရ ပြောရရင် သက်တမ်းတစ်ဝက် ကျိုးခဲ့ပါပြီ။ ဒါတောင် သက်တမ်းအရမို့လို့ တစ်ဝက်လို့ ပြောရတာပါ။ မမြင်နိုင်တဲ့ သေခြင်းတရားအရ ပြောရရင် မကြာခင် သက်တမ်းကုန်ရင်လည်း ကုန်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သေချာတာကတော့ သေဖို့ပိုပြီး နီးသွားတယ်ဆိုတာပါပဲ။ ရှေ့ဆက် ဘယ်လောက် အသက်ရှည်ဦးမယ်ဆိုတာ ပြောလို့မရပေမယ့် ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ နှစ်အရေအတွက်ကတော့ ၃၅နှစ်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။ ကျန်ခဲ့တဲ့ အတိတ်ကာလ ၃၅နှစ်ကို ပြန်ကြည့်လိုက်ရင် ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ ဘ၀ခရီးလမ်းဟာ ကြမ်းတမ်းခဲ့ပါတယ်။ အကောင်းအဆိုး ဒွန်တွဲပြီး ဖြတ်သန်းခဲ့တယ်ဆိုပေမယ့် အဆိုးတွေပဲ များခဲ့ပါတယ်။ ချမ်းသာဆင်းရဲ ဒွန်တွဲခဲ့ပေမယ့် ဆင်းရဲတွေပဲ များခဲ့ပါတယ်။ အောင်မြင်မှု ရှုံးနိမ့်မှုတွေကတော့ မျှခဲ့တယ်ပေါ့။ ဒါကလည်း ကိုယ့်ပမာဏအရ ကိုယ်ပြောတာပါ။
အတိတ်ကာလ နောက်ကြောင်းပြန်ကောက်ကြည့်ရင် တစ်ချို့အရာလေးတွေကို ခပ်ရေးရေးလေး ပြန်မြင်မိနေပါသေးတယ်။ ငယ်ငယ်ကလေးဘ၀ မထင်မရှား ကျေးရွာလေးမှာ မွေးခဲ့တာ၊ ကိုယ်မွေးပြီးတော့မှ ကိုယ့်မိသားစု ဘ၀ဟာ ချမ်းသာနေရာမှ ဆင်းရဲသွားခဲ့တာ၊ ငယ်ငယ်က အနာရောဂါများလို့ ၀ဲထူလို့ နာမည်ပြောင် အခေါ်ခံခဲ့ရတာလေးတွေ ခပ်ရေးရေးလေး သတိရနေပါသေးတယ်။ ပြီးတော့ ငယ်ငယ် ကိုရင်ဘ၀က ဆရာဘုန်းကြီးရဲ့ နွားရိုက်တဲ့ ကြိမ်လုံးတစ်လုံးကုန်အောင် အရိုက်ခံရဖူးတာ၊ အကြောတွေအားနည်းပြီး အောက်ပိုင်းသေမလို ဖြစ်ခဲ့ဖူးတာ၊ ရန်ကုန်ကို ရောက်ပြီးမှ ရန်ကုန်မှာမပျော်လို့ ရွာကိုပြန်ထွက်ပြေးရင်း တိုးကြောင်ကလေးဘူတာမှာ ရုံပိုင်ကြီးက သနားလို့ ရုံခန်းထဲမှာ အိပ်စေခဲ့တာ၊ နောက်ဆုံး မထူးပါဘူးဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေဖို့ အဆိပ်သောက်ဖူးတာ တွေကိုလည်း အတိတ်ရဲ့ ထူးခြားဖြစ်စဉ်များအဖြစ် အမှတ်ရနေမိပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ ငယ်ငယ်ကလေးဘ၀က အဆိပ်သောက်သေဖို့ တကယ်လုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒီတုန်းက အသက် ၁၃နှစ်လောက် ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဆရာဘုန်းကြီးက မနက်ဖြန် နောက်ကစာတွေ အကုန်အလွတ်ပြန်ပြရမယ် မရရင် ရိုက်မယ်ဆိုတဲ့ အမိန့်ရပြီး နဂိုကမှ ဘုန်းကြီးကို ကြောက်နေတာ ခုလို ရာဇသံပေးတော့ တော်တော်လေးကို စိတ်ညစ်ပြီး အဲဒီညက ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေဖို့ အဆိပ်သောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ခုပြန်တွေးရင် ရယ်စရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတုန်းကတော့ တကယ်သေချင်လို့ လုပ်ခဲ့တာပါ။ သောက်ခဲ့တဲ့အဆိပ်က ကျောင်းမှာ အရက်ဆေးစွဲလို့ အပြောင်းအလဲ အနေနဲ့ ကိုရင်ကြီးခဏ လာဝတ်တဲ့ ဒုလ္လဘ ကိုရင်ကြီးတွေ သောက်တဲ့ ဖင်ဆီဒိုင်း ဆေးရည်ပုလင်း ဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒီကိုရင်ကြီးက ဘာမှမသိတဲ့ ကလေးဘ၀က ဘုန်းဘုန်းကို “ကိုရင်လေး ဒီပုလင်းကို မသောက်နဲ့နော်…၊ ဒါဟာသောက်ရင် သေတတ်တဲ့ အဆိပ်ရည်တွေ“လို့ ပြောတာကို သတိရပြီး ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က သေချင်နေတော့ သူပြောတဲ့ အဆိပ်ဆိုတာ သွားယူပြီး ညအိပ်ခါနီး သောက်ခဲ့တာပါ။ အဆိပ်ဆိုတဲ့ ကလေးအတွေးနဲ့ သောက်ခဲ့ပေမယ့် အဆိပ်မဟုတ်ဘဲ ဖင်ဆီဒိုင်းအရည် ဖြစ်နေတော့ မသေဘဲ ခုအချိန်အထိ ရှိနေခဲ့တာပါ။ အဲဒီပုလင်းသာ တကယ်အဆိပ်ဆိုရင်တော့ ဘ၀မှာ တကယ်သေခဲ့မှာ အမှန်ပါပဲ။ ဒီတုန်းက အမှန်တကယ် သေချင်ခဲ့တာကိုး။ ဘ၀မှာ အဲဒီလောက်ကို ဖြစ်ခဲ့ဖူးတာတွေပါ။
နောက် အရွယ်ကလေး တဖြည်းဖြည်းရလာတော့ စာသင်တိုက်ထွက် စာသင်းရင်း ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ဆင်းရဲဒုက္ခ၊ စာမေးပွဲဖြေဖို့ ဖောင်တင်စရာ ပိုက်ဆံမရှိလို့ ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်၊ ပထမလတ်တန်းမှာ ၂နှစ်ဆက်တိုက် စာမေးပွဲကျလို့ စိတ်ဓာတ်ကျခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်တွေဟာလည်း မမေ့နိုင်စရာလေးတွေပါပဲ။ ပိုပြီးမမေ့နိုင်စရာက ကိုရင်ဝတ်နဲ့ ဓမ္မာစရိယတန်း ဆိုတော့ မာန်တက်ကာ စာမကျက်ဘဲ ဟိုလိုလို ဒီလိုလို နေရင်း ဆွမ်းခံအိမ်ဘေးက ကောင်မလေးအပေါ် စွဲလန်းမိလို့ လူထွက်ဖို့အထိ အရူးထခဲ့တဲ့ အဖြစ်ပါပဲ။ ကိုရင်ဆိုပေမယ့် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဆိုတော့ ဒီလိုအရူးစိတ်တွေလည်း ဖြစ်တတ်တာပဲလေလို့ ဖြေလို့ရပေမယ့် အကယ်၍သာ လူထွက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဘ၀မှာ ပိုဆိုးတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရမှာ သေချာပါတယ်။ နောက်တော့လည်း မထွက်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။
ဒီလို ဘ၀မှာ အမှတ်တရတွေ၊ ဆင်းရဲဒုက္ခတွေ ရှိခဲ့သလို ကျေနပ်စရာလေးတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဘ၀ရဲ့ အပျော်ဆုံးနေ့ တစ်နေ့အဖြစ် ပြောပါဆိုရင် သာသနာ့တက္ကသိုလ် ၀င်ခွင့်စာမေးပွဲ အောင်တဲ့နေ့လို့ပဲ ပြောရပါလိမ့်မယ်။ အပါးလေးရာလောက် ၀င်ခွင့်ဖြေတဲ့အထဲက ၈၀ပဲရွေးပြီး ဒီရွေးချယ်တဲ့အထဲမှာ ကိုရင်ဝိစိတ္တဆိုတဲ့ အမည်နဲ့ ၀င်ခွင့်အောင်ခဲ့တာကို သတိရရင်း ကြိုးစားမှုရဲ့ ရလာဘ်အဖြစ် ကျေနပ်ပျော်ရွှင်ခဲ့ ရပါတယ်။ သာသနာ့တက္ကသိုလ်ကြီးများရဲ့ အဓိပတိ တိပိဋက မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ ကျေးဇူးနဲ့ တက္ကသိုလ် တက်ရောက်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ အချိန်ကစပြီး ဘ၀မှာ မျက်စိပွင့် နားပွင့်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ လောကီလောကုတ္တရာ ပညာရပ်များကို ပညာရှင် ဆရာပေါင်းစုံထံမှာ ဆည်းပူးခွင့် ရခဲ့တဲ့အတွက် ဘ၀ရဲ့ လမ်းမှန်ကို ရောက်ခဲ့ရပါတယ်။ ကိုယ့်ဘ၀အတွက်နဲ့ သာသနာအတွက် ဘာလုပ်သင့်တယ်ဆိုတာ ရွေးချယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဘ၀အာမခံချက် ရှိမယ့်ပညာရပ်များကို ကြိုးစားသင်ယူရင်း တက္ကသိုလ်က ပေးတဲ့ဘွဲ့ကို ရယူကာ ဘွဲ့လွန်ဆက်တက်ခွင့်ရခဲ့ပြီး သာသနာ့တက္ကသိုလ်ရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာဌာန နည်းပြအဖြစ်ပါ တာဝန်ပေးခံရခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ အဆောင်မှူးတာဝန်၊ ပြီးတော့ ရန်ကုန်တိုင်း ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီး သင်တန်းကျောင်းရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ နည်းပြတာဝန်တွေရောပေါ့။
အောင်မြင်မှုရလာရင် နှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးမှုကလည်း ရှိလာတတ်တယ်ဆိုတာ ကိုယ်တွေ့ကြုံရပြန်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာလေး မတောက်တစ်ခေါက် တတ်တော့ လူတွေကြားမှာ၊ အထူးသဖြင့် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေကြားမှာ ဘာလိုလိုညာလို အထင်ကြီးပြီး အင်္ဂလိပ်စာ သင်ခိုင်းလို့ သင်ပေးရပါသေးတယ်။ ဒီတုန်းက ကျောင်းသားတွေထဲ ခရစ်ယာန်ကျောင်းသူ တစ်ယောက်က ဘုန်းဘုန်းကို ပရိုပို့စ်လုပ်တယ်လေ။ ဘုန်းကြီးနဲ့ မအပ်တဲ့ လာဘ်လို့ပဲ ပြောရမှာပေါ့။ သူက ဘယ်လောက်တောင်ပြောလည်း ဆိုရင် သူ့ကိုလူထွက်ယူရင် သူ့မိသားစု အားလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာ အဖြစ်ပြောင်းမယ်တဲ့..။ ခေသူတော့မဟုတ်ဘူးနော်..။ ဒါပေမယ့် အဲဒီတုန်းက ရွေးချယ်မှု မှန်ခဲ့ပါတယ်။ ကလေးမလေးကို ပြောဖြစ်လိုက်တာက “နင်တို့ မိသားစု ငါးယောက် ဗုဒ္ဓဘာသာ ပြောင်းတာမပြောင်းတာ နောက်ထား လောလောဆယ်တော့ ငါ့ဘ၀နိမ့်ကျသွားတယ်၊ ငါ့တရားပွဲတစ်ပွဲမှာ အနည်းဆုံး တရားနာသူ အယောက်ငါးဆယ်ကျော် ရှိတယ်၊ ဒီလို အများနဲ့ နင်တို့မိသားစု ငါးယောက် ငါမလဲနိုင်ဘူး၊ နောက်ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့..“လို့ ပြောဖြစ်လိုက်ပါတယ်။ မဟုတ်ရင် ဒီအချိန် ဘုန်းဘုန်းဦးဝိစိတ္တဆိုတာ ရှိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဒီလို အနောက်အယှက်တွေ ရှိခဲ့သလို မုဆိုးမနဲ့ စွပ်စွဲတာတို့၊ တစ်ခုလပ်နဲ့ သမုတ်တာတို့လည်း ခံခဲ့ရပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့်နေမှာ ဘုန်းဘုန်းရဲ့ မိဘတွေဆို ခုချိန်ထိ သူ့သားရဟန်း မိန်းမအနှောက်အယှက်ကြောင့် လူထွက်သွားမှာကို စိုးရိမ်နေတုန်း၊ စိတ်မချဖြစ်နေတုန်းပါ။ မာတုဂါမဆိုတာက သိပ်နီးနေရင်လည်း မကောင်းသလို၊ သိပ်ဝေးနေပြန်ရင်လည်း မကောင်းပါဘူး။ မနီးမဝေးပဲ ကောင်းပါတယ်။
နောက် ဘုန်းဘုန်းဘ၀ရဲ့ အမှတ်တရ တစ်ခုထပ်ပြောပါဆိုရင် ကိုရီးယားကို ရောက်လာခဲ့တာလည်း ထည့်ပြောရပါမယ်။ ၂၀၀၃ခုနှစ်မှာ အစိုးရပညာသင်ဆုနဲ့ ကိုရီးယားဗုဒ္ဓဘာသာ တက္ကသိုလ်မှာ ငါးနှစ်ပညာသင်၊ ခုတော့ ကျောင်းပြီးလို့ ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း တစ်ကျောင်းဦးဆောင် တည်ထောင်ပေးရင်း မြန်မာတွေအတွက်ရော ကိုရီးယားတွေ အတွက်ပါ တတ်နိုင်သလောက် သာသနာပြု နေတယ်ပေါ့။ တစ်ဘက်ကလည်း မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ ကျောင်းမှာလူငယ် ပရဟိတလုပ်ငန်းလေးတွေ လုပ်ရင်း ဒကာဒကာမတွေကို တရားဓမ္မ ဟောပြောပြသကာ စာချခြင်း စာရေးခြင်း အလုပ်တွေပါ လုပ်ဖြစ်နေပါတယ်။
ထားပါတော့။ အခုပြောခဲ့တာတွေက ၃၅နှစ်တာ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ ဘ၀ရဲ့ နောက်ကြောင်းအချို့နဲ့ လက်ရှိအခြေအနေလေးတွေပါ။ ပြီးတော့ သာသနာတော်မှာ ရဟန်းတစ်ပါး သာသနာစိတ်ရှိဖို့နဲ့ ရဟန်းဘ၀မြဲဖို့ဆိုတာ မလွယ်လှတဲ့အကြောင်း၊ အခက်အခဲ အနှောက်အယှက်မျိုးစုံကို ရင်ယှဉ်ကြုံတွေ့ရ တတ်ကြောင်း ကိုယ်တိုင်ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ ချိန်ထိုးပြောပြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ခုချိန်မှာတော့ စိတ်ထဲမှာ အများအတွက် ဘာလုပ်ပေးရမလဲ…၊ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေအတွက် ဘာမျှပေးရမလဲ..၊ သာသနာတော်ကို ဘယ်လိုစောင့်ရှောက်မလဲ… စတဲ့ပရဟိတ အတွေးများပဲ ဦးစီးနေပါတယ်။ ခရီးသွားဟန်လွဲ ဘ၀အတက်အကျ အနိမ့်အမြင့် အနှောက်အယှက်လေးတွေ ရှိပေမယ့် တွေ့ကြုံလာခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေအရ ခံနိုင်ရည် ရှိနေပါပြီ။ ရှောင်နိုင်တိမ်းနိုင်နေပါပြီ။ ယောင်တစ်လုံး အဆုံးခံ ရင်းစားပြန် အာဂယောက်ျားဆိုသလို လူ့ဘ၀ကထွက်ပြီး ရဟန်းဘ၀ရောက်နေချိန်မှာ အရင်းမရှုံးအောင် တတ်နိုင်သမျှ အတ္တဟိတ၊ ပရဟိတ လုပ်ငန်းတွေ ကြိုးစားလုပ်မယ်လို့လည်း စိတ်ကူးထားတယ်လေ။ လုပ်လည်း လုပ်နေဖြစ်ပါပြီ။ အရှိန်အဟုန်နဲ့ ကြီးကြီးမားမား မလုပ်နိုင်သေးပေမယ့် ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာလေးနဲ့တော့ အကောင်အထည် ဖော်ဖြစ်နေပါပြီ။ အထူးသဖြင့် လူငယ်တွေရဲ့ ပညာရေး စနစ်ကို ဦးစားပေးတဲ့ ပညာဒါန လုပ်ငန်းလေးတွေကို ပိုပြီးလုပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားနေပါတယ်။ မကြာမီ အကောင်အထည် ပေါ်လာမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
တကယ်တော့ ဒီလိုအခြေအနေ ရောက်လာအောင် ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ ၃၅နှစ်ဟာ သိပ်ကိုရှည်ကြာခဲ့ပါတယ်။ လူတစ်ယောက် ဘ၀မှာ အောင်မြင်ချိန် အလုပ်လုပ်ပေးချိန်ဟာ ဘယ်လောက်မှ မကြာလိုက်ပေမယ့် အဲဒီလို ဖြစ်လာအောင်၊ လုပ်နိုင်အောင် ရင်းခဲ့ရတဲ့ ကာလတွေက အလွန်ကြာလှပါတယ်။ ပါရမီ အားကောင်းတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် အောင်မြင်ကျော်ကြားမှုနဲ့ အတ္တ ပရလုပ်ငန်းများမှာ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုတွေဟာ အချိန်အတိုအတွင်း ဖြစ်လာနိုင်ပေမယ့် ပါရမီအားနည်းလှတဲ့ ဘုန်းဘုန်းတို့လို သာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အတွက်တော့ ရင်းနှီးရတာ၊ ပြုစုပျိုးထောင်ရတာ အချိန်အတော်ကြာပါတယ်။ တစ်ချို့ဆိုရင် ဘ၀ရဲ့ သုံးပုံနှစ်ပုံလောက်က ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြုစုရင်းနဲ့ အချိန်ကုန်နေပြီး တကယ်အလုပ် လုပ်နိုင်ချိန်ကျတော့ အသက်အရွယ်က အကျပိုင်းရောက်ကာ ထင်သလောက် မလုပ်နိုင်တာတွေ ရှိပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘုန်းဘုန်းအနေနဲ့ ဘ၀သက်တမ်း တစ်ဝက်လောက်မှာ ခုလို ကိုယ်တတ်နိုင်သမျှ အတ္တဟိတ၊ ပရဟိတ အလုပ်လေးတွေ လုပ်ပေးနိုင်တာ၊ လုပ်ပေးခွင့်ရတာတွေ အပေါ်မှာ ကျေနပ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်အမြင့်ကို မကြည့်ဘဲ ကိုယ့်အောက်မှာ ကိုယ့်လောက်မှ အဆင်မပြေသူတွေ၊ ကိုယ့်လောက်မှ မသိသူတွေ ရှိနေသေးပါလားဆိုတာတွေကို ကြည့်ပြီး ကိုယ်လုပ်ပေးနိုင်တာတွေ လုပ်ပေးနေခွင့် ရနေတဲ့အတွက် ဘာမှမလုပ်တာထက်စာရင် တော်သေးတယ်လို့ ဖြေဆည်မိပါတယ်။
ပြောရင်းပြောရင်းနဲ့ စကားက အပြင်ရောက်ကုန်ပါပြီ။ ဘုန်းဘုန်းအဓိက ပြောချင်တာက အခု အသက် ၃၅နှစ်ပြည့်ပြီဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတိပေးရင်းနဲ့ ကိုယ်အပါအ၀င် တခြားဘယ်သူမဆို မွေးနေ့တစ်ခါ ရောက်ရင် သေဖို့တစ်နှစ်နီးလာပြီဆိုတာ သံဝေဂယူနိုင်ဖို့ ပြောချင်တာပါ။ တစ်နှစ်ပြည့်မှ မဟုတ်ပါဘူး အချိန်နဲ့ အမျှ သေဖို့သွားနေကြတယ်ဆိုတာ မမေ့စေချင်တာပါ။ မွေးလာခြင်းရဲ့အဆုံးဟာ သေဆုံးခြင်းပဲ ဆိုတာနဲ့ အဲဒီသေဆုံးမှုဟာလည်း မွေးတဲ့နေ့ကစပြီး အချိန်မရွေး လာနိုင်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သေခြင်းတရားကို အမြဲဆင်ခြင်ကာ မမေ့မလျော့ နေကြဖို့ပါ။ အသက်ရှည်မှု မရှည်မှုဟာ အဓိကမကျဘဲ အသက်ရှင်ခိုက်မှာ ကိုယ့်အတွက်ကော အများအတွက်ပါ ဘယ်လောက်လုပ်နိုင် ခဲ့တယ်ဆိုတာက အဓိကကျပါတယ်။ ကိုယ့်အခြေအနေ ကိုယ့်အရည်အချင်းနဲ့ ဘာမှမဖြစ်လောက်ပါဘူးလို့ မတွေးမိပါစေနဲ့။ ကိုယ့်လောက်မှ မဖြစ်၊ မရှိတဲ့သူတွေလည်း အများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာ တွေးပြီး သူတို့တွေအတွက် ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ လုပ်ပေးနေနိုင်မယ်ဆိုရင်ကိုပဲ အသက်ရှင်နေတဲ့အခိုက်ဟာ သူ့အတိုင်းအတာနဲ့သူ တန်ဘိုးရှိနေပါပြီ။ ဒါကြောင့် သေဖို့သွားရင်း ရှင်နေတဲ့အခိုက်မှာ ကိုယ့်အတွက် ကိုယ်ဖြည့်ပြီး အများအတွက်လည်း တတ်နိုင်သမျှ လုပ်ပေးကြဖို့ တိုက်တွန်းခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစကားတွေဟာ အသက်၃၅နှစ်ပြည့်လာတဲ့ ဘုန်းဘုန်းကိုယ်ကို ဘုန်းဘုန်းသတိပေးတဲ့ စကားများဖြစ်ပြီး လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀အတက်အကျ ခံယူချက်၊ ရည်ရွယ်ချက်၊ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ကြည့်ပြီး သတိသံဝေဂ ယူလိုတဲ့သူတွေ ယူနိုင်အောင်သာ ဘ၀တစ်ဆစ်ချိုးလေးများကို နောက်ကြောင်းကောက်ပြလိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သေချာတာကတော့ ဘုန်းဘုန်းကိုယ်တိုင် သေဖို့တစ်နှစ် နီးခဲ့ပြီဆိုတာပါပဲ…
။ အချိန် 1/12/2010 04:53:00 PM
မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ တရားဦးဒေသနာတော်ဖြစ်သည့် ဓမ္မစကြာ ဒေသနာတော်ကိုဖတ်ရင်း သမုဒယသစ္စာအဖွင့်ကို အထူးသတိထားပြီး ဖတ်ဖြစ်၏။ ဒုက္ခအားလုံးသည် ဤသမုဒယကြောင့် ဖြစ်သဖြင့် သမုဒယသည် အကြောင်းတရား ဖြစ်ပြီး ဒုက္ခသည် အကျိုးတရား ဖြစ်သည်ကို ကောင်းစွာနားလည် သဘောပေါက်မိ၏။ ဗုဒ္ဓက သမုဒယဟူသည် တဏှာပင်ဖြစ်ပြီး ထိုတဏှာသည် ကာမဂုဏ်တို့တွင် တပ်မက်တွယ်တာ ကပ်ငြိတတ်သည့် ကာမတဏှာ၊ အရာရာမြဲသည်၊ ရှိသည်စသည်ဖြင့် ဖြစ်သမျှဘ၀ကို တပ်မက်တတ်သည့် ဘ၀တဏှာနှင့် အရာအားလုံးသည် သေလျှင်ပြတ်ပြီဖြစ်သဖြင့် အကြောင်းအကျိုး၊ အကောင်းအဆိုး၊ ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဟူသည် မရှိဟု စွဲလမ်းယူဆ တပ်မက်တတ်သည့် ၀ိဘ၀တဏှာဟူ၍ သုံးမျိုးရှိကြောင်း ဓမ္မစကြာ ဒေသနာတွင် ရှင်းလင်းဟောကြားတော် မူထား၏။ တဏှာအဖွင့်ကိုဖတ်ရင်း သတ္တ၀ါတို့သည် ဤတဏှာများကြောင့် ဒုက္ခကိုယ်စီ ဖြစ်နေကြသည်ကို ဆက်လက်တွေးနေမိ၏။ အထူးသဖြင့် ဖြစ်သမျှ ဘ၀အပေါ် တပ်မက်တွယ်တာကာ ထိုထို ဘ၀များတွင် ကျင်လည်နေရမှုကို ဒုက္ခဟု မမြင်၊ ထိုဘ၀အပေါ် တပ်မက်တွယ်တာမှုမှ ရုန်းထွက်ရန် မကြိုးစားဘဲ တွယ်ပြီးရင်းတွယ်ရင်း ဖြစ်နေကြသည့် အဖြစ်ကို တွေးနေမိရင်း ဘာကြောင့် ရုန်းမထွက်နိုင်ကြသနည်းဟု မေးခွန်းထုတ်နေမိ၏။
အဖြေကား တွယ်တာမှု သမုဒယ တဏှာကြောင့်ဟုသာ ထွက်ပေါ်ခဲ့၏။ မှန်၏။ ပုထုဇင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ဘ၀ကို တပ်မက်တတ်သည့် တဏှာ၏ ချည်နှောင်မှုကြောင့် ရရှိလာသည့် ဘ၀အခြေအနေ ဖြစ်တည်မှု အနေအထားများမှ ရုန်းထွက်ရန် ခက်ခဲတတ်ကြခြင်း ဖြစ်၏။ ရရှိလာသည့် ဘ၀တွင်သာ ပျော်ပိုက်နေတတ်ကြ၏။ မည်မျှပင် ဆင်းရဲဒုက္ခများဖြင့် ကြုံတွေ့နေရသော်လည်း ထိုဒုက္ခတွင်းထဲမှ ရုန်းထွက်ရန် အားထုတ်မှု မပြုကြပေ။ ရရစာစား သွားသွားလာလာဖြင့်သာ ဖြစ်ရာဘ၀ ဖြစ်သည့်အနေအထားတွင် ဖြစ်သလိုသာ နေလိုက်တတ်ကြတော့၏။ သမုဒယတဏှာ၏ နှောင်ဖွဲ့မှုကြောင့် ခဏတာဖြစ်တည်မှုလေး အပေါ်မှာပင် သာယာနေတတ်ကြ၏။ ထို့ကြောင့်လည်း ဘုန်းကြီးလည်း ဘုန်းကြီးဘ၀၊ သီလရှင်လည်း သီလရှင်ဘ၀၊ လူလည်းလူဘ၀၊ ထို့ထက် ဆိုရလျှင် အလုပ်သမားလည်း အလုပ်သမားဘ၀၊ အခိုင်းအစေလည်း အခိုင်းအစေဘ၀၊ ကျွန်လည်း ကျွန်ဘ၀၊ သူတောင်စားလည်း သူတောင်စားဘ၀၊ ယုတ်စွအဆုံး ခွေး၊ ၀က်၊ နွား၊ ကြက် စသည့် တိရိစ္ဆာန်များသည်လည်း အသီးသီးသော ဘ၀လေးတွေမှာ ပျော်နေတတ်ကြခြင်း ဖြစ်၏။ ဤသည်မှာ ဘ၀ကို တပ်မက်တတ်သည့် ဘ၀နိကန္တိက လောဘကြောင့် တစ်နည်းအားဖြင့် ဆိုရသော် ဘ၀တဏှာကြောင့်ပင် ဖြစ်ပါ၏။
လောဘအမျိုးမျိုး ရှိသည့်အနက် ဘ၀ကို တပ်မက်တတ်သည့် လောဘသည်လည်း သတ္တ၀ါများအား ဒုက္ခအပေါင်းတွင် ကျင်လည်နေရအောင် လောင်မြိုက်စေ၏။ သို့သော် ပုထုဇင်သတ္တ၀ါများကား လောင်မြိုက်သည်ဟု မထင်။ ချို့မြိန်သည်ဟု ထင်နေတတ်၏။ စင်စစ် ထိုလောဘတဏှာကြောင့်ပင် သတ္တ၀ါတို့သည် ရရှိလာသည့် ဘ၀တွင် မည်မျှပင် ဒုက္ခများ ရှိနေပါသော်လည်း ထိုဘ၀လေးတွင် ပျော်နေကြ၏။ အခိုက်အတန့်ကာလ အဆင်ပြေမှုများတွင် ကျေနပ်နေကြ၏။ သတ္တ၀ါတို့၏ နေ့စဉ်ဖြတ်သန်းမှုများတွင် ဒုက္ခများ မည်မျှပင် ရှိနေကြသော်လည်း ဖြစ်ရာဘ၀ အခြေအနေလေးများတွင် ပျော်မွေ့နေကြ၏။ ဟိုမှသည်မှ သွားလာဖြစ်ပျက်နေသော်လည်း ဖြစ်သမျှဘ၀ ရောက်သမျှ နေရာများတွင် ပျော်မွေ့နေတတ်ကြ၏။ လူသည်လည်း လူ့အဆင့်အတန်း အနေအထားအရ လူ့ဘ၀အသီးသီးတွင် တဏှာ၏ နှောင်ဖွဲ့မှုမှ ရုန်းမထွက်နိုင်ဘဲ ရရှိနေသည့် ဘ၀တွင် ကျေနပ်နေကြသကဲ့သို့ တိရစ္ဆာန်များသည်လည်း ဖြစ်ရာဘ၀တွင် ပျော်နေတတ်ကြ၏။ ထို့ကြောင့်လည်း သူတောင်းစားလည်း ထိုနေ့အတွက် အကောင်းစားများ တောင်းစား၍ ရသည့်အခါ ပျော်ရွှင်နေမိတတ်ကြသကဲ့သို့ အမှိုက်ကောက်သမားသည်လည်း အမှိုက်များများ ကောက်၍ရသည့်အခါ ပျော်နေမိတတ်ကြ၏။ ထို့အတူ အခြားအခြားသော လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းများလည်း မိမိတို့ ဖြစ်တည်နေသည့် ဘ၀တွင် အသီးသီး ပျော်ရွင်နေမိကြ၏။ ကြက်၊ ၀က် စသည့် တိရိစ္ဆာန်များလည်း အလားတူပင်။ အသက်ခံရမည့် အရေးတွေးမမြင်နိုင်သေးဘဲ ကျွေးသမျှလေးတွေ အပေါ်မှာ သာယာနေတတ်သည့် သဘောရှိ၏။ အစာများများစားရ၍ အသားတိုးလာသည့်အခါ ရောင်းစား၊ သတ်စားခံရမည်ကို မမြင်မိဘဲ အခိုက်အတန့် ကောင်းကောင်းစားရသည့် အပေါ်မှာသာ အငမ်းမရ စားနေမိတော့၏။ ဤသည်မှာ ဘ၀တဏှာ၏ သဘောပင် ဖြစ်၏။ ထိုတဏှာကြောင့်ပင် ဖြစ်သမျှဘ၀၊ ဖြစ်သမျှအခြေအနေတွင် အငမ်းမရ တွယ်တာနေတတ်ကြ၏။ မိမိဖြစ်ချင်သကဲ့သို့ ဖြစ်ခွင့်မရှိဘဲ သူဖြစ်ချင်သလို ဖြစ်နေသည့် သဘောကို ဒုက္ခဟု မမြင်ဘဲ သုခဟု မြင်နေသဖြင့် ဖြစ်သမျှအခြေအနေတွင် ပျော်မွေ့နေတတ်ခြင်း ဖြစ်၏။ တဒင်္ဂသာယာမှုအပေါ် ထာဝရဟုထင်ကာ ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်း တဏှာမှ ရုန်းထွက်နိုင်အောင် မကြိုးစားကြဘဲ တဏှာ၏ သားကောင်အဖြစ်ကိုသာ လိုလားနေကြသဖြင့် ဒုက္ခပင်လယ်ဝေမှုသည် အဆုံးမသတ်နိုင်ဘဲ ဖြစ်နေကြတော့၏။
ဘ၀တဏှာကြောင့် ဖြစ်သမျှ ဘ၀တွင် သာယာပျော်ရွှင် နေတတ်သည့် သဘောကို ဖော်ညွှန်းပြထားသည့် ၀တ္ထုလေးတစ်ပုဒ် ဖတ်ဖူး၏။ ရှေးအခါက ကာသိတိုင်း ပါဋလိမြို့ကို စိုးစံအုပ်ချုပ်သည့် အဿက အမည်ရှိ ရှင်ဘုရင်းကြီးတွင် ဥပရိ အမည်ရှိ မိဖုရားတစ်ပါး ရှိ၏။ ထိုမိဖုရားသည် ရုပ်ရည်အဆင်း အလွန်လှပပြီး ရှင်ဘုရင်၏ အသည်းစွဲ ဖြစ်သည်နှင့်အမျှ မာနလည်း အလွန်ကြီးသည်ဟု ဆို၏။ ထို့ကြောင့်လည်း အလှမာန်တက်က မည်သူ့ကိုမျှ တလေးတစား အရေးတယူ မရှိလှပေ။ မာန်မာန အားကြီးပြီး ထိုအလှအပေါ်တွင်သာ ယစ်မူးနေသဖြင့် ကုသိုလ်ကောင်းမှုလည်း ပြုလုပ်ခြင်း မရှိပေ။ နောက်ဆုံးတွင် ဥပရိ မိဖုရားကြီးသည် ရုတ်တရက် သေဆုံးသွားခဲ့လေ၏။ ကုသိုလ်ကောင်းမှုမရှိ မာန်မာနဖြင့်သာ အချိန်ကုန်ခဲ့သဖြင့် သေသည့်အခါ နွားချေပိုးအဖြစ် ပြန်လည်ဖြစ်ခဲ့တော့၏။ မာန၏ ကြောက်စရာ အကျိုးပေးပင် ဖြစ်ပါ၏။ မာနကြီးလျှင် အမျိုးဇာတ်ယုတ်ညံ့တတ်သည်ဟု ဆိုသည့်အတိုင်း အယုတ်ညံ့ဆုံး အမျိုးဇာတ်အဖြစ် တိရစ္ဆာန်ဘ၀တွင် မေးဖွားခဲ့ရ၏။ အဿကဘုရင်ကြီးသည် မိဖုရားအပေါ် အလွန်သံယောဇဉ် ကြီးသူဖြစ်သည့်အလျှောက် မိဖုရားကြီး ဆုံးပြီးနောက်ပိုင်းတွင်လည်း ထိုသံယောဇဉ်စိတ်ဖြင့် မအိပ်နိုင်မစားနိုင် တမိုင်မိုင်သာ ဖြစ်နေတော့၏။ မင်းကြီး၏ အခြေအနေကို ကြည့်ပြီး မှူးမတ်များမှာ ရှင်ဘုရင် စိတ်သက်သာရေး ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရင်း နောက်ဆုံးတွင် ဟိမ၀န္တာအတွင်း တရားဓမ္မ အားထုတ်ကာ ဈာန်အဘိညဉ်တန်ခိုးနှင့် ပြည့်စုံသည့် ဘုရားလောင်း ရသေ့ကို သတိရပြီး ဘုရင်ကြီးအနေဖြင့် မိဖုရားအပေါ် သိပ်စွဲလန်းနေလျှင် မိဖုရားကြီး မည်သည့်ဘ၀တွင် ဖြစ်နေသည်ကို မေးမြန်းလျှောက်ထားရန် အကြံပြု၍ ဘုရားလောင်း ရသေ့ထံ ခေါ်ဆောင်သွားလေ၏။
ဘုရားလောင်း ရသေ့ထံ ရောက်သည့်အခါ အဿက ဘုရင်ကြီးက “အရှင်ရသေ့ အနေဖြင့် ကျွန်ုပ်၏ မိဖုရားကြီး ဘယ်ဘ၀မှာ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ ပြောပေးပါ“ဟု လျှောက်ထားရာ ဘုရားလောင်းရသေ့က “မိဖုရားကြီး ဖြစ်နေသည့်ဘ၀ကို ဘုရင်ကြီးကိုယ်တိုင် တိုက်ရိုက်စကား ပြောစေပါမည်“ဟု ဆိုကာ နွားချေးပိုးဖြစ်နေသည့် မိဖုရားကြီးကို အဘိညဉ်တန်ခိုးဖြင့် ထင်ရှားစေကာ စကားပြောစေ၏။ ထိုအချိန်တွင် မိဖုရားကြီးတစ်ဖြစ်လဲ နွားချေးပိုးမမှာ ဘ၀တူ နွားချေးပိုးနှင့် အတူပျော်မွေ့နေ၏။ နွားချေးပိုးဖြစ်နေသည့် မိဖုရားကိုကြည့်ကာ အဿက ဘုရင်ကြီးမှာ မယုံနိုင်စရာ ဖြစ်နေသော်လည်း ပိုးမနှင့်တိုက်ရိုက် စကားပြောကြည့်သည့်အခါ မိမိ၏ မိဖုရားကြီး ဖြစ်နေသည်ကို လက်ခံသွား၏။ ဘုရင်ကြီးသည် အသက်နှင့်ထပ်တူ ချစ်လှသည့် မိဖုရားကြီးအနေဖြင့် လူ့ဘ၀တုန်းက လိုပင် သူ့အပေါ် ချစ်မချစ် သိလိုလှပေ၏။ ထို့ကြောင့် နွားချေးပိုးမအား “အသင်သည် လူ့ဘ၀က ဘ၀ကျင်ဖော်ဖြစ်ခဲ့သည့် ငါလိုရှင်ဘုရင်နှင့် အခု နွားချေးပိုးမဘ၀တွင် အတူနေထိုင်သည့် နွားချေးပိုးအထီး နှစ်ဦးအနက် ဘယ်သူကို ပိုချစ်သလဲ”ဟု မေးလေ၏။ ထိုအခါ နွားချေးပိုးမက “အရှင်မင်းကြီး လူ့ဘ၀ကလည်း လူ့ဘ၀အလျှောက် အရှင်မင်းကြီးအပေါ် သံယောဇဉ်ရှိပါတယ်၊ အခု နွားချေးပိုးဘ၀မှာတော့ အရှင်မင်းကြီးထက် ဒီနွားချေးပိုး အထီးကို ပိုပြီးချစ်ပါတယ်၊ အရှင်မင်းကြီး လူ့ဘ၀မှာ လူ့အသုံးအဆောင်များဖြင့် စည်းစိမ်အပြည့် ရှိနေသလို နွားချေးပုံထဲမှာ ဖြစ်နေတဲ့ နွားချေးပိုးမ အဖြစ်ဟာလည်း အစစအရာရာ ပြည့်စုံပါတယ်၊ ဒီနွားချေးပိုးဘ၀မှာပဲ ပျော်ပါတယ်…” စသည်ဖြင့် အဖြေပေးလိုက်လေ၏။ အဿကဘုရင်ကြီးမှာ သူ့က ချစ်သလောက် မိဖုရားကြီးဟာ သူ့အပေါ် မချစ်ပါလားဟု တွေးကာစိတ်မကောင်း ဖြစ်ခဲ့ရသေး၏။ ဘုရင်ကြီး၏ အခြေအနေကို ကြည့်ကာ ဘုရားလောင်း ရသေ့က ဖြေတရားဟောခဲ့၏။
“အရှင်မင်းကြီး… ဘာမှ စိတ်မကောင်း မဖြစ်ပါနဲ့၊ ဒါဟာ သတ္တ၀ါတွေရဲ့ သဘောပဲ ဖြစ်ပါတယ်၊ သတ္တ၀ါတိုင်းမှာ ရှိနေကြတဲ့ တဏှာရဲ့ သဘောပဲ ဖြစ်ပါတယ်၊ တဏှာဟာ သတ္တ၀ါတွေကို ဖြစ်လေရာဘ၀မှာ ရုန်းမထွက်နိုင်အောင် ချည်နှောင် တွယ်ပတ်ထားတဲ့ သဘောရှိတဲ့အတွက် သတ္တ၀ါတိုင်းဟာ ဖြစ်ရာဘ၀၊ ရရာဘ၀မှာ ဖြစ်သမျှ ရသမျှနဲ့ ကျေနပ်နေကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်၊ ဒီလို ဖြစ်နေသမျှ ဘယ်ဘ၀ရောက်ရောက် တဏှာရဲ့ ချုပ်နှောင်မှုဖြင့် ဖြစ်သမျှနေရာမှာ တွေ့သမျှ အရာတွေနဲ့ တွယ်နှောင်ရစ်ပတ်နေကြဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်၊ ဒီတဏှာ ရှိနေသမျှ ဒုက္ခကိုယ်စီ ရှိနေကြဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်၊ ဒီတဏှာရဲ့ ချည်နှောင်မှုမှ ရုန်းထွက်နိုင်မှသာ ဒုက္ခအပေါင်းမှ ကင်းငြိမ်းမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘုရင်းကြီးအနေနဲ့ ငါ့ကောင်းသလောက် သူမကောင်းဘူး ငါချစ်သလောက် သူမချစ်ဘူးဆိုတဲ့ သမုဒယ တဏှာဦးစီးထားတဲ့ အတွေးများ၊ ရစ်ပတ်ထားတဲ့ လောဘတဏှာ သံယောဇဉ်များမှ ရုန်းထွက်နိုင်အောင်သာ ကြိုးစားပြီး တဏှာကင်းရာ နိဗ္ဗာန်သို့ သွားနိုင်အောင်သာ အမြန်ဆုံး အားထုတ်သင့်ပါတယ်…” စသည်ဖြင့် ဘုရားလောင်း ရသေ့မှ အဿက ဘုရင်ကြီးအား တရားစကား ဟောကြားတော်လိုက်၏။ ထိုအခါမှသာ ဘုရင်ကြီးလည်း စိတ်သက်သာရာ ရသွားပြီး နန်းတော်သို့ ပြန်လည်ကြွသွားလေတော့၏။
အထက်ပါ ၀တ္ထုဇာတ်ကြောင်းကို ကြည့်ပါက တဏှာ၏ သဘောကို ကောင်းစွာနာလည်နိုင်မည် ဖြစ်၏။ သတ္တ၀ါတို့သည် ဖြစ်လေရာ ဘ၀မှာ ပျော်နေတတ်သည်ကို ထင်ထင်ရှားရှား သိနိုင်မည်ဖြစ်၏။ မိမိတို့ လက်တွေ့ဘ၀တွင်လည်း ထိုသဘောများကို ကြုံတွေ့ဖူးကြမည် ဖြစ်၏။ ဖြစ်သမျှနေရာ ရသမျှအရာ တွေ့သမျှ သူတွေအပေါ် သံယောဇဉ်ဖြစ်ကာ ပျော်မွေ့နေတတ်ကြသဖြင့် ဒုက္ခကို ဒုက္ခဟု မမြင်ဖြစ်နေကြသည်ကို နားလည်နိုင်မည်ဖြစ်၏။ တစ်ခါတစ်ရံ အချို့သူများသည် မိမိက သံယောဇဉ်ထား အလေးထားသော်လည်း မိမိကွယ်ရာတွင် အခြားသူတစ်ဦးနှင့် ပျော်မွေ့နေတတ်၊ မိမိအပေါ် မေ့နေတတ်သည်ကို ကြုံဖူးကြမည်ဖြစ်၏။ ထို့အတူ မိမိကိုယ်တိုင်လည်းပဲ အခြားတစ်နေရာ အခြားသူတစ်ဦးဦး အခြားအရာ တစ်ခုခုအပေါ်တွင် သာယာနေပြီး ထိုအခြေအနေများအပေါ်တွင် ကျေနပ်နေတတ်သည်လည်း ရှိတတ်၏။ မိမိအနေဖြင့် ဖြစ်လေရာ ဘ၀တွင် သာယာနေတတ်သော်လည်း မိမိက တွယ်တာမိသည့် သူ၊ တွယ်တာမိသည့် အရာကိုကား အခြားသူများနှင့် ပျော်ရွှင်နေမှုကို မလိုလားတတ်ပေ။ မိမိကိုသာ သံယောဇဉ်ဖြစ်စေချင်၏။ တွယ်တာစေချင်၏။ သို့သော် ဖြစ်မလာခဲ့ပေ။ ထိုသို့လိုလားသော်လည်း မဖြစ်သည့်အခါ အလိုမကျဖြစ်ခြင်း၊ စိတ်လိုက်မာန်ပါပြုခြင်း၊ ဒေါသထွက်ခြင်း၊ ယူကြုံးမရဖြစ်ခြင်း၊ သောကဖြစ်ခြင်း၊ နောင်တဖြစ်ခြင်းများဖြင့် ဘ၀ကို ဒုက္ခတွေဖြင့်သာ ပြည့်စေလေတော့၏။ ထိုဒုက္ခအားလုံး၏ အရင်းခံကား သံယောဇဉ် အနှောင်အဖွဲ့နှင့် တဏှာ၏ ချည်နှောင်မှုကြောင့်ပင် ဖြစ်၏။ သို့သော် သတ္တ၀ါတို့သည် ထိုသဘောကို သဘောပေါက်ကာ ထိုတဏှာ၏ လွတ်ရာသို့ ရုန်းထွက်ရန် မကြိုးစားကြဘဲ တဏှာ၏ ချည်နှောင်မှု အတိုင်းသာ လိုက်နေမိကြတော့၏။ စင်စစ် ထိုဒုက္ခ အားလုံး၏ တရားခံကား ဖြစ်သမျှကို တွယ်တာစေတတ်၊ ကပ်ငြိစေတတ်၊ သံယောဇဉ်ဖြစ်စေတတ်သည့် ဘ၀နိကန္တိက လောဘတဏှာကြောင့်ပင် ဖြစ်၏။
တွယ်တာမှု တဏှာသည် သတ္တ၀ါတို့အား ဒုက္ခကိုသာ တိုးစေသဖြင့် ထိုတဏှာကို ပယ်သတ်ရပေမည်။ တဏှာ၏ ချည်နှောင်မှုမှ ရုန်းထွက်ရပေမည်။ ထိုတွယ်တာမှုကို အရိယာမဂ်ဖြင့် အကြွင်းမဲ့ မပယ်သတ်နိုင်သေးသမျှ တဏှာ၏ နှောင်ဖွဲ့မှုမှ ရုန်းထွက်ရန် မဖြစ်နိုင်သေးပေ။ ထို့ကြောင့် သတ္တ၀ါတို့သည် ဘ၀တဏှာတည်းဟူသော အနှောင်အဖွဲ့ သံယောဇဉ်ကို ပယ်သတ်၍ တဏှာ၏ ချည်နှောင်မှုမှ ရုန်းထွက်နိုင်ရန် တစ်ခုတည်းသော လမ်းစဉ်ဖြစ်သည့် တဏှာကင်းရာသို့သွားရာ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးလမ်းကို လျှောက်လှမ်းရန် လိုအပ်ပေ၏။ ထိုလမ်းကို လျှောက်လှမ်းနိုင်ရန် သတိကို အခြေပြုထားသည့် ဉာဏ်နှင့်ယှဉ်သည့် သတိပဋ္ဌာန် ၀ိပဿနာကျင့်စဉ်ကို အချိန်ရှိခိုက် လုံ့လဆိုက်ကာ အားထုတ်ရန် လိုအပ်လှပေ၏။ ဤသို့မှ မလုပ်နိုင်လျှင် တဏှာ၏ ချယ်လှယ်မှုမှ ရုန်းထွက်နိုင်ရန် မဖြစ်နိုင်သေးပေ။
ထို့ကြောင့် ဒုက္ခပေါင်းစုံနှင့် တွေ့ကြုံခံစားနေရသည့် သတ္တ၀ါအပေါင်းတို့သည် တွယ်တာမှု သမုဒယ တဏှာ၏ ချည်နှောင်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နေရသည့် ထိုဒုက္ခအပေါင်းမှ ကင်းဝေးနိုင်စေရန်အတွက် လက်ရှိမိမိတို့ ရရှိကျင်လည်နေရသည့် ဘ၀အသီးသီးတွင်သာ ပျော်မွေ့မနေကြဘဲ ထိုထိုဘ၀ အသီးသီးမှ တဏှာကင်းရာလမ်းသို့ အမြန်ဆုံး လျှောက်လှမ်းနိုင်ရန် အချိန်ရှိခိုက် ရုန်းထွက်လိုက်ကြရန်နှင့် တွယ်တာမှု သံယောဇဉ်မှန်သမျှသည် မည်သည့်အခါမျှ သတ္တ၀ါတို့ကို အေးမြမှုကို ပေးနိုင်သည့်အရာ မဟုတ်ကြောင်း ကောင်းစွာသဘောပေါက်ပြီး ထိုသံယောဇဉ်များကို အမြန်ဆုံး ဖြတ်နိုင်ရန်သာ ကြိုးစားသင့်ပါကြောင်း အသိပေးစကား ပြောကြားလိုက်ရပါပေ၏။
။ အချိန် 1/10/2010 04:00:00 PM
“ကြမ္မာငြိုးမှိန်၊ ပျက်စီးချိန်၌၊ ပညိနြ္ဒိ၊ သတိမှောက်မှား၊ တရားမကျင့်၊ ကျင့်ယွင်းချွတ်၏။ ကျင့်ချွတ်သောခါ၊ ပညာ အမျိုး၊ တန်ခိုးထိန်ညီး၊ ဘုန်းတန်းကြီးလည်း၊ ပျက်ဆီးမြဲလျှင်၊ မချွတ်ပင်တည်း။ အကြင်လူများ၊ ယောက်ျားမိန်းမ၊ စသည်ထိုထို၊ ပျက်စီးလိုက၊ အဆိုအသွား၊ အမှားမှားဖြင့် ဘုရားသော်မှ၊ ဟောမရဘူး။” (မန်လည်ဆရာတော်)
လောကသားတိုင်း ရှောင်လွဲမရ မဖြစ်မနေ ကြုံတွေ့ရမည့် တရားတစ်ခုကား အတက်အကျ၊ အနိမ့်အမြင့် ဟူသော လောကဓမ္မခေါ် လောကဓံတရားပင် ဖြစ်၏။ မည်သည့်အရာမျှ အမြဲမရှိဟူသော လောကနိယာမ အတိုင်းပင် လောကရှိ အရာအားလုံးသည် တစ်တသမှတ်တည်း အမြဲတည်တံ့နေသည်ဟူ၍ မရှိပေ။ အဆိုးရှိသကဲ့သို့ အကောင်းလည်း ရှိ၏။ အနိုင်ရှိသကဲ့သို့ အရှုံးလည်းရှိ၏။ ချမ်းသာရှိသကဲ့သို့ ဆင်းရဲလည်းရှိ၏။ အတက်ရှိသကဲ့သို့ အကျလည်းရှိ၏။ အဖြစ်ရှိသကဲ့သို့ အပျက်လည်းရှိ၏။ ဤကား မည်သူမဆို ကြုံတွေ့ရမည့် သဘောတရားများ ဖြစ်၏။ မိမိတို့လက်ရှိ ရရှိထားသည့် ဘ၀အခြေအနေတွင် မြင့်နေရာမှ နိမ့်သွားသည်များ ရှိနိုင်၏။ ရှိနေရာမှ မရှိသည်နှင့်လည်း ကြုံတွေ့နိုင်၏။ ကောင်းနေရာမှ အဆိုးဘက်သို့လည်း ရောက်သွားနိုင်၏။ အဆိုးဘက်သို့ ဦးတည်လာနေလျှင် မိမိကိုယ်တိုင် သတိပြုဆင်ခြင်ပြီး ရောက်ရှိလာမည့် အဆိုးများ အလွန်ဆိုးဆိုးဝါးဝါးကြီး ဖြစ်မသွားစေရန် ကြိုးစားအားထုတ်ရ၏။ ထိုသို့ အဆိုးဘက်၊ အပျက်ဘက် ဦးတည်လာသည့် အကျပိုင်းများ ရောက်လာသည့်အခါ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိ ခံနိုင်ရည် မရှိဘဲ သတိလက်လွတ် နေမိပါက မိမိကိုယ်တိုင် အမှားလမ်းကို အမှန်ထင်ကာ ဇွတ်အတွင်း လျှောက်လှမ်းမိတတ်၏။ ထိုအခါ ပျက်ဆီးရန်လမ်းစလည်း တဖြည်းဖြည်းတိုးလာကာ အဆိုးဆုံးသော ပျက်စီးမှုဘက်သို့ ဦးတည်လာပြီး အပြောအဆို အလုပ်အကိုင် အကြံအစည်များသည်လည်း အမှားမှားအယွင်းယွင်း ဖြစ်လာတတ်၏။ နောက်ဆုံးတွင်ကား ဘုရားပင်လျှင် ကယ်မရသည့်သူများအဖြစ် ရောက်ရှိပျက်စီး သွားတတ်၏။
မှန်၏။ လောကတွင် ထိုသို့ သတိမမူမိသဖြင့် မြင့်ရာမှ နိမ့်ရာသို့ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ကျရောက်သွားသူများကို တွေ့ဖူးကြမည်ဖြစ်၏။ အကောင်းဆုံးများ ကြုံနေရာမှ အဆိုးဆုံးသို့ ရောက်ရှိပျက်စီးသွားသူများကို ကြုံဖူးကြမည် ဖြစ်၏။ မိမိကိုယ်တိုင် ကိုယ်တွေ့ကြုံဖူးကြသူများ ရှိသကဲ့သို့ မိမိနှင့်သက်ဆိုင်သည့် မိမိပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဖြစ်ပျက်သွားသည်ကိုလည်း ကြုံဖူးကြမည်ဖြစ်၏။ သေချာသည်မှာ လောကဓံဒီလှိုင်း ရိုက်ပုတ်သည့်အချိန် သတိလက်လွတ်ဖြစ်ခဲ့သဖြင့် အမှန်အမှား မခွဲခြားနိုင်ဘဲ အမှားလမ်းကို ဇွတ်အတင်း တိုးဝင်မိသဖြင့် အထိနာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်၏။ အကယ်၍ သတိလက်လွတ် မဖြစ်ဘဲ “ဒါဟာလောကဓံ တရားပဲ၊ အချိန်တန်ရင် ပြီးသွားမှာပဲ“ဟူသော အသိဖြင့် မည်မျှပင် ကံနိမ့်နေပါစေ မိမိလုပ်ရမည့် ကောင်းသည့်အလုပ်များကိုသာ အဆက်မပြတ် ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ပါက ကျသော်လည်း အကျနာမည် မဟုတ်ပေ။ ပျက်သော်လည်း အပျက်ဆိုးမည် မဟုတ်ပေ။ ထို့ကြောင့် ပညာရှင်များက “ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သတိလက်မလွတ်စေနှင့်”ဟု ဆိုကြခြင်းဖြစ်၏။
သို့သော် မောဟအမိုက် ဖုံးလွှမ်းနေသည့် သတ္တ၀ါများကား ထိုသဘောကို သတိမပြုမိဘဲ ရှိနေတတ်၏။ အမှန်ကို မမြင်နိုင်သည့် မသိမှု အ၀ိဇ္ဇာ အားကြီးလှသဖြင့် အမှားလမ်းကိုသာ ဇွတ်အတင်း တိုးဝင်နေမိတတ်၏။ ပျက်စီးရန် အချိန်ကျလာလျှင်ကား သတ္တ၀ါတို့သည် ထိုသို့ဖြစ်တတ်၏။ လူဖြစ်စေ၊ ရဟန်းဖြစ်စေ ပျက်စီးချိန်တန်လာလျှင် မည်သူကပင် သတိပေးပြောဆို တားမြစ် ဆုံးမပါသော်လည်း နားမ၀င်ဘဲ မိမိလုပ်သမျှ အပြုအမူ အနေအထိုင် အပြောအဆိုများကိုသာ အမှန်ထင်နေတတ်၏။ ထို့ကြောင့်လည်း နောက်ဆုံးတွင် မြင့်ရာမှ နိမ့်ရာသို့ ကျရောက်ပျက်ဆီးသွားပြီး ဒုက္ခများဖြင့်သာ ကျင်လည်နေသူများ အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိသွားလေတော့၏။ မန်လည်ဆရာတော်ကြီး ဆုံးမသကဲ့သို့ပင် ထိုသူများသည် “အဆိုအသွား အမှားမှားဖြင့် ဘုရားသော်မှ ဟောမရသည့် သူများအဖြစ်” ရောက်ရှိသွားတော့၏။
စာရေးသူတွင် နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာကြာ အတူစား အတူလာ စိတ်တူသဘောတူ ပေါင်းသင်းနေထိုင်ခဲ့ကြသည့် သူငယ်ချင်း နှစ်ပါးရှိခဲ့ဖူး၏။ တစ်ပါးက စာရေးသူထက် ၂-နှစ်ကြီးပြီး တစ်ပါးက ၂-နှစ်ငယ်၏။ အကြီးသည် အင်္ဂါသားဖြစ်ပြီး အငယ်သည် ကြာသာပတေးသား ဖြစ်ကာ စာရေးသူက ဗုဒ္ဓဟူးသား ဖြစ်၏။ တက္ကသိုလ်မှာ လာရောက်ဆုံတွေ့ကြသည့် စာရေးသူတို့ သုံးဦးသည် အတွဲညီလှ၏။ စိတ်တူကိုယ်တူဖြင့် မရှိအတူ ရှိအတူ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ဖေးမကူညီခဲ့ကြ၏။ ထို့ကြောင့်လည်း စာရေးသူတို့ သူငယ်ချင်းသုံးဦးကို ကြည့်ကာ အများက အားကျခဲ့ကြ၏။ စာရေးသူတို့ကို အတုယူကာ စံထားကြ၏။ “ကလျာဏ မိတ္တဆိုတာ အဲဒီလို ဖြစ်နေရမှာ”ဟု စာရေးသူတို့ကိုကြည့်ကာ သာဓကပြုကြ၏။ စာရေးသူတို့ သုံးဦးသည် အများအမြင် ကပ်လောက်အောင်ပင် အတွဲညီခဲ့ကြ၏။ သို့သော် ယခုမူ အကြီးအငယ် ထိုသူငယ်ချင်း နှစ်ဦးကား ပျက်စီးသွားခဲ့လေပြီ။ အကြီးဖြစ်သူသည် အရှင်ပျက်ပျက်သွားခဲ့ပြီး အငယ်ဖြစ်သူသည်ကား အသေပျက် ပျက်သွားခဲ့၏။ အကြီးကား အသက် ၃၁နှစ်လောက်တွင် မြင့်မြတ်သည့် ရဟန်းဘ၀မှ နိမ့်ကျသည့် လူအဖြစ်ပြောင်းလဲကာ လူထွက်သွားသဖြင့် မြင့်မြတ်သည့် ရဟန်းဘ၀ ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီး အငယ်ကား အသက် ၃၁နှစ်အရွယ် ၁၂ပိုင်း ၂၀၀၈ခုနှစ်က အသည်းကင်ဆာဖြင့် ပျံလွန်တော်မူသွားသဖြင့် ရဟန်းဘ၀ပင်မဟုတ် လူ့ဘ၀ပါ ပျက်စီးသွားခဲ့၏။ အကြီးသူငယ်ချင်း ရဟန်းမှာ အငယ်ထက် အရင်စောပြီး လူထွက်သွားကာ ရဟန်းဘ၀ ပျက်စီးခဲ့၏။
လူထွက်သွားသည့် အကြီးသူငယ်ချင်းသည် အခြားကြောင့် မဟုတ်၊ မာတုဂါမကြောင့် ဖြစ်၏။ သူလူမထွက်ခင်က စာရေးသူတို့နှစ်ပါး လူမထွက်ဖို့ သူ့ကို အမျိုးမျိုး တာမြစ်ခဲ့ကြ၏။ အမျိုးမျိုး နာအောင်ပြောခဲ့ကြ၏။ စာရေးသူဆိုလျှင် အမုန်းခံပြီး အမျိုးမျိုးခိုင်းနှိုင်းပြောဆို တားမြစ်ခဲ့၏။ မည်သို့မျှ မရခဲ့ပေ။ မဘက်လိုက်တော့ မိုက်ဘက်ပါဆိုသကဲ့သို့ မာတုဂါမ၏ အစွမ်းက မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်း သူငယ်ချင်း အစွမ်းထက် ပိုအားကောင်းခဲ့၏။ မောဟအမှောင် အားကြီးလာလျှင် အမေပြောလည်းမရ၊ အဖေပြောလည်းမရ၊ နောက်ဆုံး ဘုရားပြောသော်လည်း ရမည်မဟုတ်ပေ။ သူဆိုလျှင် အမေတစ်ခု သားတစ်ခုဘ၀မှ ရဟန်းဖြစ်လာသူ ဖြစ်၏။ မိခင်ကြီးမှာ ကုန်စိမ်းရောင်းပြီး သားရဟန်း လိုလေသေးမရှိရလေအောင် ပစ္စည်းလေးပါး ထောက်ပံ့မှုကို ပြုပေးနေသူဖြစ်၏။ ထိုမိခင်ကြီးလည်း သူမမြင်တော့ပေ။ နောက်ဆုံး အားလုံးက လက်လျှော့လိုက်ရတော့၏။ ထိုအခါမှ “လောကမှာ ပျက်ဆီးချိန်တန်လျှင် ဘုရားရှင်သော်မှလည်း မတားမြစ်နိုင်” ဆိုသည်ကို ကောင်းစွာ သဘောပေါက်ခဲ့၏။ ထိုသူငယ်ချင်းကား အမှားကို အမှန်ထင်ပြီး စာရေးသူတို့ မည်မျှပင် ပြောဆိုသော်လည်း နားမ၀င်ဘဲ နောက်ဆုံးတွင် စာရေးသူတို့ကိုပင် ရှောင်သွားတော့၏။ ရဟန်းဘ၀ ပျက်စီးသွားသည့် သူငယ်ချင်းအဖြစ်ကို ကောက်ချက်ချကြည့်ပါက အခြားကြောင့်မဟုတ် မာတုဂါမကြောင့်ပင် ဖြစ်၏။ မှန်၏။ “ပစ္စည်းမာတု ဤနှစ်ခု ဘိက္ခု သေမင်း ဓားနှစ်စင်း“ ဟု ဆိုသည့်အတိုင်း ရဟန်းတော်များ၏ အန္တရာယ်မှာ ပစ္စည်းလာဘ်လာဘနှင့် မာတုဂါမပင် ဖြစ်၏။ ထိုသူငယ်ချင်းကား မာတုဂါမ ဖျက်စီးသဖြင့် ရဟန်းဘ၀မှ လူ့ဘ၀သို့ ပြောင်းလဲပျက်စီးခဲ့၏။ မြင့်ရာမှ နိမ့်ရာသို့ ကျရောက်သွားခဲ့၏။ မာတုဂါမ ဖျက်၍ပျက်သည်ဟု ဆိုက တစ်ဘက်သတ် ကျနေပေမည်။ စင်စစ် လက်ခုပ်ဟူသည် နှစ်ဖက်တီးမှ မည်သည်ဟု ဆိုသကဲ့သို့ပင် ရဟန်းလည်းမှား လူလည်းမှားသောကြောင့်သာ ဖြစ်၏။ လူလည်း သတိမရှိ အသိမ၀င် ဖြစ်ခဲ့သကဲ့သို့ ရဟန်းလည်း မိမိရဟန်းဟူသည့် အသွင်ကို မေ့ခဲ့သောကြောင့်သာ ဖြစ်ပါ၏။ ယခုမူ ထိုသူငယ်ချင်းကား ကလေးနှစ်ယောက်နှင့် ဒုက္ခပင်လယ်ဝေနေခဲ့သည်ဟု ကြားရသဖြင့် စိတ်မကောင်း ဖြစ်ခဲ့ရ၏။ စာရေးသူမှာ သူငယ်ချင်းနှစ်ပါး ရှိသော်လည်း နှစ်ပါးလုံး အရှင်ပျက်နှင့် အသေပျက် ပျက်သွားကြသဖြင့် အလွန်ထိတ်လန့် ခဲ့ရပြီး မိမိအလှည့်တွင်ကား လောကဓံသဘောအရ အပျက်များ ရောက်လာတတ်သော်လည်း အပျက်မနာရန်၊ အကျမနာရန်သာ သတိပြု ဆင်ခြင်နေနေရပေ၏။
ဤနေရာတွင် စာရေးသူ ဆိုလိုသည်မှာ ပျက်စီးချိန်တန်လျှင် မည်သူမျှ တားမရနိုင်ဟူသည့် အချက်ပင်ဖြစ်၏။ ထိုသဘောကို ထင်ရှားစေလို၍သာ မိမိ၏ လက်တွေ့ဘ၀ အတွေ့အကြုံများဖြင့် သာဓကပြခြင်းသာ ဖြစ်၏။ လူထွက်သွားသည့် သူငယ်ချင်းနှင့် ပျံလွန်တော်မူသွားသည့် သူငယ်ချင်းတို့အား အသုံးချခြင်း မဟုတ်သည်ကို သိစေလို၏။ စင်စစ် ထိုနှစ်ပါးလုံးသည် အချိန်တန်သဖြင့်သာ ပျက်စီးသွားကြခြင်း ဖြစ်၏။ ကံစွမ်းကုန်သွား၍သာ ဘ၀ပြောင်း သွားကြခြင်းဖြစ်၏။ ပျံတော်မူသွားသည့် အရှင်သည် သက်တမ်းမကုန်သေးသော်လည်း ကံစွမ်းကုန်သွားသဖြင့် ပျက်စီးသွားခြင်းဖြစ်ပြီး လူထွက်သွားသည့် အရှင်သည်ကား ရဟန်းဘ၀ဖြင့် နေရမည့် ကံစွမ်းကုန်သွားသဖြင့် ရဟန်းဘ၀ ပျက်စီးသွားခြင်း ဖြစ်၏။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ နှစ်ပါးလုံးသည် ပျက်စီးချိန်တန်သဖြင့် ပျက်စီးသွားခြင်း ဖြစ်သည်ဟုသာ မိမိကိုယ်ကို မိမိဖြေဆည်နေမိသည်ကား အမှန်ပင်ဖြစ်ပါ၏။
စာရေးသူကဲ့သို့ပင် အခြားသူများလည်း ထိုသို့ အလားတူ အဖြစ်အပျက်လေးများ ကြုံဖူးကြမည် ဖြစ်ပါ၏။ သေချာတွေးကြည့်လျှင် အကြောင်းကြောင့် အကျိုးဖြစ်ခြင်းသာ ဖြစ်၏။ မည်သည့်အရာမဆို အကြောင်းတရားကင်း၍ အကျိုးတရားဖြစ်ရိုးထုံစံ မရှိပေ။ ပျက်စီးချိန်တန်၍ ပျက်စီးသည်ဟု ဆိုသော်လည်း ပျက်စီးခြင်းအကြောင်း တရားကြောင့်သာ ပျက်စီးသွားကြခြင်းဖြစ်၏။ ဘယ်သူမပြု မိမိမှုဟု ဆိုသည့်အတိုင်း မိမိ၏ အပြုအမူ အပြောအဆို အလုပ်အကိုင်များကြောင့်သာ ပျက်စီးကြခြင်းဖြစ်၏။ ယခုဘ၀ ပျကစဆီးရာ ပျက်စီးကြောင်း မည်သည့်အရာမျှ မလုပ်ဖူးသော်လည်း အတိတ်ဘ၀ တစ်ခုခုက ပြုလုပ်ခဲ့သည့် မိမိ၏လုပ်ရပ်များက ရှိနေသဖြင့် ထိုအကြောင်းတရားကြောင့် အကျိုးတရားအဖြစ် ယခုဘ၀တွင် ပျက်စီးနိုင်၏။ သို့သော် ကံဟူသည် အတိတ်ကံ ပစ္စုပ္ပန်ကံဟူ၍ ရှိသဖြင့် အတိတ်ကံ အကျိုးပေး ရှိနေသော်လည်း ပစ္စုပ္ပန်ကံ အားကောင်းနေလျှင် အတိတ်ကံ အကျိုးပေး အားနည်းတတ်ပြီး ပစ္စုပ္ပန်ကံ အားနည်းနေလျှင် အတိတ်ကံ အကျိုးပေး အားကောင်းတတ်၏။ ထို့ကြောင့် အချို့ အတိတ်အကုသိုလ်ကံ အကျိုးပေးသော်လည်း ပစ္စုပ္ပန်ကောင်းကံ အာကြီးသဖြင့် သေရမည့်အဖြစ်မှ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရသည့်အဖြစ်လောက်သာ ခံရတတ်သည်လည်း ရှိ၏။ ထို့ကြောင့် ပစ္စုပ္ပန်တွင် ကောင်းကံများ များများဖြည့်ဆည်းထားပြီး မမေ့မလျော့ သတိရှိထားလျှင် ပျက်စီးချိန်တန်၍ ပျက်စီးတတ်သော်လည်း အဆိုးဆုံးအဖြစ်သို့ မရောက်နိုင်သည်ကို သဘောပေါက်ဆင်ခြင်ထားရန် လိုအပ်လှပေသည်။
အချုပ်အားဖြင့် ဖြစ်ခြင်းပျက်ခြင်း၊ အောင်မြင်ခြင်း ရှုံးနိမ့်ခြင်း၊ ချမ်းသာခြင်း ဆင်းရဲခြင်း စသည်တို့သည် လောကဓံတရားများ ဖြစ်သကဲ့သို့ အကြောင်းအကျိုး ဆက်စပ်နေသည့် တရားများလည်း ဖြစ်သဖြင့် အချိန်တန်လျှင် မလွဲမသွေ ကြုံတွေ့ရမည်ဟူသည်ကို နားလည်သဘောပေါက်ထားရန် လိုအပ်ပေ၏။ အပျက်မှသာမဟုတ် အဖြစ်လည်းပဲ အချိန်ကာလကျလာလျှင် ဖြစ်လာတတ်၊ ရောက်လာတတ်သည်ကို သိရှိကာ အကောင်းပဲဖြစ်ဖြစ် အဆိုးပဲဖြစ်ဖြစ် ဖြစ်သမျှကို “ဒါလည်းပဲ ပြီးသွားမှာပါပဲ” ဟူသည့် ခံယူချက်ဖြင့် အမှတ်သတိ မပြတ်ရှိကာ ရင်ဆိုင်နိုင်ရန်သာ ကြိုးစားကြရန် ဖြစ်ပါ၏။ ဤသို့ အကောင်းအဆိုး လောကဓံကို ခံနိုင်ခြင်းသည် မင်္ဂလာတစ်ပါးဖြစ်ပြီး ဘ၀အောင်မြင်တိုးတက်ရေး၏ အဓိက သော့ချက်ဖြစ်ပေ၏။ ထို့ကြောင့် ပျက်စီးချိန်တန်၍ ပျက်စီးနိုင်သော်လည်း ပျက်စီးမှုနှင့် ကြုံတွေ့သည့်အခါ မမေ့မလျော့ မပေါ့မဆသည့် သတိတရားဖြင့် ရဲရဲရင်ဆိုင် ကျော်လွားနိုင်လျှင် အထိနာ အကျနာ သက်သာနိုင်သဖြင့် ပညာတရား၊ သတိတရား မမှားရအောင် အကျင့်တရား မချွတ်မှားဘဲ ကြိုးစားကျင့်ကြံ နေထိုင်ရန်သာ အကြံပြုလိုက်ပါသည်။ အားလုံး အမှတ်သတိ မပြတ်ရှိကြပါစေ…